I-Solcoseryl Eye Drops > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Solcoseryl - imiyalo esetshenzisiwe
Amaconsi wamehlo uSolcoseryl asetshenziswa ku-ophthalmology ekwelapheni izilonda ezahlukahlukene zeso kanye ne-cornea. Isebenza ngokwenza kusebenze izinqubo ze-metabolic ezenzeka kumaseli. Ibuyisela imetabolism ejwayelekile, ikhuthaza ukuvuselelwa ngokushesha kwezicubu ezonakele, ivimbela ukwakheka kwezibazi. Kuhle kakhulu kumonakalo wamakhemikhali noma owemishini. Kunqunywe esikhathini se-postoperative ukuthola kabusha okusheshayo kanye nokubuyiselwa kwamakhono okubuka.
Ukulungiselela kuqukethe into esebenzayo - i-dialysate ejwayelekile, ekhuthaza ukungena okujulile kumaseli kanye nokujwayelekile kokusebenza kwe-metabolism. Amaconsi ahanjiswa ngesimo sejeli; lapho efakwa, asatshalaliswa ngokulinganayo phezu kolwelwesi lwe-mucous, anikeza umphumela othembekile.
Amaconsi wamehlo uSolcoseryl anomphumela osheshayo futhi osebenzayo, onomthelela ekwandisweni kwezicubu, i-oksijini iqala ukuzungeza kangcono. Akunabuthi kanye nemiphumela emibi eqinile. Kubekelwe ukuphulukiswa kwamanxeba ohlobo oluhlukile.
Umuthi usiza ukuphulukisa amanxeba avela ezilondeni ezinjengokuthi:
umthelela wokusebenza wezinto zakwamanye amazwe (ukuxhumana nezinsimbi zensimbi nokugoqwa kwenhlabathi, isihlabathi, ingilazi, njll.)
Ngokwesihlukaniso semithi, iSolcoseryl yezidakamizwa ifakwa eqenjini lezidakamizwa elithuthukisa i-trophism futhi livuselele ukuvuselelwa kwezicubu. Kutholakala ngezindlela eziningi - ukuphathwa okwangaphandle, ukuphathwa kwabazali nokuphatha ngomlomo. Izindlela ezahlukahlukene zisetshenziselwa ukwelashwa kwezifo, zichazwa ngudokotela ngokuya ngesimo sesiguli.
Kunezindlela eziyisithupha zokukhishwa kweSolcoseryl isiyonke: i-jelly, i-ointment, ijeli, isixazululo sokuphathwa kwe-intramuscular and intravenous, dragee for ukuphathwa komlomo, ukunamathisela kwamazinyo ukwelashwa kwezinkinga zamazinyo. Ukwakheka okuningiliziwe komuthi ngamunye:
Ukuqoqwa kwe-dialysate okwehlisiwe kusuka ku-serum yegazi lethole
I-Cream Solcoseryl (amafutha)
I-petrolatum emhlophe, i-cholesterol, i-methyl ne-propyl parahydroxybenzoate, amanzi, utshwala be-cetyl
Isisindo esinamafutha amaningi umbala omhlophe-ophuzi, iphunga elincane lomhluzi ne-petroleum jelly
I-20 g kumashubhu e-aluminium nasezinqinini zamakhadibhodi anemiyalo
I-sodium carmellose, amanzi, i-propylene glycol, i-methyl ne-propyl parahydroxybenzoate, i-calcium lactate pentahydrate
Ingenangqondo, ayinanombala, icacile, ayinankinga, inephunga elincane lesimilo
2 noma i-5 ml kuma-ampoule amnyama wengilazi, amashizi
I-Carmellose sodium, i-sorbitol ecwebile, i-benzalkonium chloride, amanzi omjovo, i-disodium edetate dihydrate
Alinombala noma liphuzi, liyageleza
I-5 g kumashubhu we-aluminium
Namathisela amazinyo ukwelashwa okuphezulu kolwelwesi lwama-mucous
Ukungaguquguquki komile kogogo kwenza ifilimu
I-Solcoseryl iyi-hemodialysate ehluthwe equkethe izakhi eziningi zesisindo esiphansi se-cell mass ne-serum yethole yamathole enesisindo se-5000 D, izakhiwo zazo okwamanje ezifundwa kuphela ngezindlela zamakhemikhali nezekhemisi.
Ekuhlolweni in vitro , kanye nangezifundo zokuhlolwa kokuqala nokwelashwa, kutholakale ukuthi uSolcoseryl:
- Kwandisa izinqubo eziphindaphindayo nezivuselelayo,
- ineqhaza ekwenzeni kusebenze izinqubo ze-aerobic metabolic kanye ne-phosphorylation oxidative,
- kwandisa ukusetshenziswa komoya-mpilo in vitro futhi ivuselela ukuthuthwa kweglucose kumaseli ngaphansi kwe-hypoxia namaseli ancishisiwe ngokomzimba,
- kwandisa ukwakheka kwe-collagen ( in vitro ),
- Kukhuthaza ukukhula kweselula nokufuduka ( in vitro ).
Ijeli leSolcoseryl alinawo amafutha njengezakhi ezisizayo, okwenza kube lula ukuwasha. Kuthuthukisa ukwakheka kwezicubu ze-granulation kanye nokuqedwa kwe-exudate.
Kusukela kubonakale ukubumbana okusha nokusha kwesilonda, kuyanconywa ukusebenzisa amafutha e-Solcoseryl aqukethe amafutha njengezakhi ezisizayo futhi akha ifilimu evikelayo ebusweni besilonda.
Ukwenza izifundo zokufakwa, ukusatshalaliswa kanye nokuphuma kwesidakamizwa kusetshenziswa izindlela ezijwayelekile ze-pharmacokinetic akunakwenzeka, ngoba isakhi esisebenzayo somuthi (i-hemodialysate ehluthisiwe) sinemiphumela emibi ye-pharmacodynamic enziwa ngamangqamuzana anezici ezihlukile ze-physicochemical.
Izinkomba Solcoseryl ®
Izifo ze-peripheral occlusion zemithambo ye-peripheral methics III - IV ngokusho kukaFontaine ezigulini ezine-contraindication / ukungabekezeleli ezinye izidakamizwa,
ukugula okungapheli kwe-venous, ehambisana nokuphazamiseka kwephrophic (I-Ulcera cruris), ezimweni zokuphikelela kwabo,
ukuphazamiseka kokudla komgogodla nokugeleza kwegazi (ischemic kanye ne-hemorrhagic stroke, ukulimala kobuchopho obuhlukumezanayo).
I-Solcoseryl ijeli, i-oint
Umonakalo omncane (ama-abrasions, imihuzuko, ukusikeka).
Burns 1 no 2 degrees (ukushiswa yilanga, ukushisa okushisayo).
Kunzima ukuphulukisa amanxeba (kufaka phakathi izilonda ezindexekile nezilonda zokucindezela).
Kusungulwa i-hypersensitivity kuma-dialysates egazi,
njengoba umjovo weSolcoseryl uqukethe i-parahydroxybenzoic acid derivatives (i-E216 ne-E218) esetshenziswa njengezindawo zokulondolozwa, kanye namanani omkhondo we-benzoic acid (E210) yamahhala, umuthi akufanele usetshenziswe uma kukhona ukungahambelani nalezizakhi,
idatha yezokuphepha yokusetshenziswa komjovo weSolcoseryl ezinganeni ayitholakali, ngakho-ke, lo muthi akufanele unikezwe izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18,
Umjovo weSolcoseryl akufanele uhlanganiswe nezinye izidakamizwa, ngaphandle kwesisombululo se-isotonic sodium chloride nesixazululo se-5% kashukela.
I-Solcoseryl ijeli, i-ointment.
Hypersensitivity kwesinye sezakhi zomuthi.
Ngokunakekela - ngenhloso yokuphendula kokungezwani komzimba.
Ngaphandle kokuntuleka kwedatha kumthelela we-teratogenic weSolcoseryl, umuthi kufanele usetshenziswe ngokuqapha ngesikhathi sokukhulelwa. Ayikho imininingwane ngokuphepha kokusebenzisa umjovo weSolcoseryl ngesikhathi sokuqunjelwa. Uma udinga ukusebenzisa umuthi, kunconywa ukuthi uyeke ukuncelisa ibele.
Ezimweni ezingavamile, ukungezwani komzimba kungakhula (i-urticaria, i-hyperemia ne-edema endaweni yokujova, umkhuhlane). Kulokhu, kuyadingeka ukumisa ukusetshenziswa komuthi futhi unikeze ukwelashwa okubonakalayo.
Ezimweni ezingavamile, endaweni yokusetshenziswa kweSolcoseryl, imiphumela yokungezwani komzimba ingakheka ngohlobo lwe-urticaria, i-marerminal dermatitis. Kulokhu, kufanele uyeke ukusebenzisa lo muthi futhi ubonane nodokotela.
Esizeni lapho kufakwa khona i-Solcoseryl ijeli, kungaba nomzwa omfushane wokuvutha. Uma ukushiswa kungahlali isikhathi eside, ukusetshenziswa kwe-Solcoseryl ijeli kufanele kulahlwe.
Umjovo weSolcoseryl akufanele uhlanganiswe nezinye izidakamizwa, ikakhulukazi ngama-phytoextracts.
Ukungahambisani kwemithi kweSolcoseryl ngesimo sesisombululo sendlela yokujova enamafomu wobuphathi sekusunguliwe:
khipha Ginkgo biloba,
Njengezixazululo zokuxutshwa komjovo weSolcoseryl, isisombululo se-isotonic sodium chloride kuphela nesisombululo se-5% kashukela kufanele sisetshenziswe.
Ukusebenzisana kweSolcoseryl nezinye izidakamizwa eziphezulu akukasungulwa.
Isithako seSolcoseryl:ku / ku noma ku / m.
Ekwelapheni kwezifo zokuphelelwa ngamandla kwe-arterial occlusion ngezigaba III - IV ngokusho kukaFontaine - iv 20 ml nsuku zonke. Mhlawumbe i-intravenous drip in solution isotonic sodium chloride noma isisombululo se-5% kashukela. Isikhathi sokwelashwa sifinyelela kumaviki ama-4 futhi sinqunywa isithombe sasemtholampilo salesi sifo.
Ekwelapheni ukugula okungapheli kwe-venous, ehambisana nokukhubazeka kwe-trophic (Ulcera cruris) - iv 10 ml izikhathi ezi-3 ngesonto. Isikhathi sokwelapha asikho ngaphezu kwamasonto ama-4 futhi sinqunywa yisithombe somtholampilo sesi sifo. Isinyathelo esibalulekile esengeziwe esenzelwe ukuvimbela i-edema ye-venous edema ukusetshenziswa kwebhandeji yokucindezela usebenzisa i-bandage elastic.
Lapho kukhona ukuphazamiseka kwezicubu zomzimba wendawo, kunconywa kanyekanye i-Solcoseryl jelly, namafutha kaSolcoseryl.
Ekwelapheni imivimbo ye-ischemic ne-hemorrhagic ngesimo esinamandla futhi esinzima ngokweqile njengemfundo ephambili - ku / ngo-10 noma ama-20 ml, ngokulandelana, nsuku zonke izinsuku eziyi-10. Lapho usuqede isifundo esikhulu - ku / m noma ku / 2 ml izinsuku ezingama-30.
Ukulimala kobuchopho obuhlungu (ukuphazamiseka kobuchopho obunzima) - iv 1000 mg nsuku zonke izinsuku ezinhlanu.
Uma ukuphathwa kwezidakamizwa kungeke kwenzeke, umuthi ungalawulwa IM, imvamisa 2 ml ngosuku ngendlela engeyona.
Ngokusebenzisa / ekusebenziseni izidakamizwa ezingekho emthethweni, kufanele kuphathwe kancane, ngoba kuyisixazululo se-hypertonic.
I-Solcoseryl ijeli, i-ointment:endaweni.
Faka isicelo ngqo endaweni elimele ngemuva kokuhlanza inxeba kokuqala usebenzisa isixazululo magciwane.
Ngaphambi kokwelashwa kwezilonda ezikhuluphayo, kanye nezimo zokutheleleka nge-purulent kwesilonda, kudingeka ukuthi kutholakale ukwelashwa okuhlinzwa okokuqala.
I-solcoseryl ijeli isetshenziswa emanxebeni amasha, amanxeba anomjuluko omanzi, izilonda ezinemiphumela yokumanzisa - ungqimba oluncane esilondeni esihlanzwe izikhathi ezi-2-3 ngosuku. Izindawo ezinama-epithelization eseziqalile kunconywa ukuthi zifakwe i-Solcoseryl. Ukusetshenziswa kwejeli leSolcoseryl kuyaqhubeka kuze kube yilapho izicubu zomzimba zokumbiza zibunjiwe esikhunjeni esonakalisiwe kanye nokomisa kwesilonda.
Isithambisi seSolcoseryl sisetshenziselwa ikakhulukazi ukwelashwa kwamanxeba owomile (angenamanzi).
Isithambisi seSolcoseryl sisetshenziselwa ungqimba oluncane esilondeni esihlanzwa izikhathi eziyi-1-2 ngosuku, singasetshenziswa ngaphansi kokugqoka. Inkambo yokwelashwa ngamafutha kaSolcoseryl iyaqhubeka kuze kube yilapho isilonda selulaphe ngokuphelele, ukuphuma kwayo kanye nokwakheka kwezicubu ezibunjiwe.
Ukwelashwa kokulimala okungathi sína kwesikhumba nezicubu ezithambile, ukusetshenziswa kanyekanye kwezindlela zobuzali zeSolcoseryl kunconyiwe.
I-Solcoseryl (ijeli, isithambiso) akufanele ifakwe esilondeni esingcolisiwe, ngoba ayinazo izingxenye ze-antimicrobial.
Ukusetshenziswa kweSolcoseryl, njengayo yonke eminye imishanguzo, akunasidingo ngesikhathi sokukhulelwa nokuncelisa futhi kungenzeka kuphela uma kudingekile ngokuphelele nangaphansi kokuqondisa kukadokotela.
Uma kwenzeka kubuhlungu, ubomvu besikhumba esiseduze nendawo yokusebenza kweSolcoseryl, imfihlo kusuka esilondeni, umkhuhlane, kufanele uthintane nodokotela ngokushesha.
Uma ukuphulukiswa kwendawo ethintekile kungakapheli amasonto ayi-2-3 kungabhekwa ngokusetshenziswa kweSolcoseryl, kuyadingeka ukubonana nodokotela.
Ngokushesha ngemuva kokufakwa, umuzwa ovuthayo omncane ungavela. Lo mphumela ongathandeki unyamalala ngemuva kwesikhashana, ngakho-ke akukho zinyathelo okufanele zithathwe ukuze uqedwe.
Kubantu abane-hypersensitivity kuzakhi, ukuthuthukiswa kokuphendula komzimba kubhekwe, obekuhambisana:
ukuvuvukala kwamajwabu amehlo
Ukuze ungabangeli ukusabela okungekuhle, kufanele ufunde ngokucophelela incazelo nokwakheka kwalo muthi, futhi uthintane nodokotela ngaphambi kokusebenzisa amaconsi.
I-Rash - Umphumela Side Side
Izindleko ezimaphakathi zomuthi ama-ruble angama-280.
Kunamathuluzi amaningi afanayo ekwakhiweni noma izinkomba zokuwasebenzisa. Ukufana kufaka phakathi:
Ngaphambi kokufaka esikhundleni sangempela nge-analogue, bonana nochwepheshe.
Inani elikhulu lokubuyekezwa mayelana naleli thuluzi lihle. Umuthi usisize kaninginingi ukubhekana namanxeba angathi sína nokulimala komoya. Imvamisa, amaconsi anegalelo ekuthini asetshenziswe ngokushesha ukuxhumana namalensi.
Phakathi kokubuyekezwa okungekuhle, kwembulwa ukuthi izakhi ezifakiwe ekwakhiweni zingadala ukungahambi kahle komqondo kanye nomzwa omncane ovuthayo ngokushesha ngemuva kokufakwa. Ukuvimbela le miphumela engemihle, kunconywa ukuthi ufunde ngokucophelela imiyalo yokusebenzisa futhi ulalele izeluleko odokotela. Akunjalo noma nini lapho kufanele uthathe izinqumo ezizimele mayelana nomthamo kanye nenkambo yokwelashwa.
Ukubuyiselwa emuva inqubo eyinkimbinkimbi engenakukwenza ngaphandle kokuyalela izidakamizwa zamaqembu ahlukahlukene. Uma i-pathology ihlotshaniswa nokuphazamiseka kwe-trophic, ukwehla kwezinqubo ze-metabolic, khona-ke amalungiselelo weSolcoseryl, atholakala ngezindlela ezahlukahlukene zomthamo, azosiza ekululameni. Ngayinye yazo ilungele ukusetshenziswa kuma-pathologies athile: isibonelo, i-Solcoseryl ijeli libekelwe izifo zamehlo nezicubu ezithambile, izixazululo zokulimala amanxeba, ukusheshisa imetabolism.
Ukwakheka nemiphumela yesidakamizwa
Kungakhathalekile ukuthi ifomu lomthamo, noma ngabe iyi-Solcoseryl ijeli noma isisombululo, isithako esisebenzayo kanye nesitholi (noma kungahle kube khona okumbalwa) kufakiwe ekwakhiweni. Isithako esisebenzayo esikhulu ukukhishwa egazini lamathole, noma kunalokho, i-dialysate, ehlanziwe kusuka kumaprotheni, okungafaki amacala okuvela kokungezwani komzimba.
Umuthi unemiphumela elandelayo yokwelapha elandelayo:
Ijeli le-Ointment ne-Solcoseryl libuyisela ukuphulukisa kolwelwesi lwe-mucous lwamehlo ngemuva kokulimala kwemvelo ehlukahlukene (isibonelo, ngemuva kokushiswa, ukulimala, njll.).
Umuthi uyatholakala ngalezi zinhlobo ezilandelayo:
amafomu omthamo othambile: ijeli (10% no-20%), amafutha (5%), ukunamathisela amazinyo,
amafomu wesilinganiso soketshezi: isixazululo kuma-ampoules,
Ifomu lomthamo oqinile: ama-dragees, amaphilisi.
IGel Solcoseryl ayinawo umbala, ifana ngokufana, inephunga lomhluzi wenyama. Kutholakala kumashubhu angama-g angama-20. I-eye eye Solcoseryl iyisisindo esigelezayo, esingenamibala noma onesifo esincane esiphuzi. Kukhona iphunga elidangele, elithile, njengejeli elilula.
Amafutha ahlukile kwesisekelo sejeli, esivame ukuvama iVaseline. Nguye onikeza iphunga lesimilo. Ngenxa ye-petroleum jelly, i-ointment ino-greasy, i-solid frequency. Kutholakala kumashubhu angama-20 g.
Isixazululo esisetshenziswa njengomjovo iyi-kephuzi eliphuzi, nelicacile elinephunga njengomhluzi wenyama. I-Excipient - amanzi angenantambo wokujova. Kutholakala kuma-ampoules engilazi emnyama yevolumu encane ye-2 no-5 ml. Isixazululo senzelwe ukwethulwa kwezicubu zomsipha, kanye nokuya egazini.
I-Beige paste enephunga le-mint iyatholakala kumashubhu anomthamo ongadluli kuma-g 5. Amatafula (noma amadonsa) atholakala kwimithamo ehlukahlukene kusuka ku-0.04 kuya ku-0,2 g.
I-Ocular Solcoseryl inomphumela ophumelela kakhudlwana kulwelwesi lwe-mucous lwamehlo ngomonakalo womshini hhayi kuphela i-cornea, kodwa futhi ne-conjunctival sac. Izincomo zokusetshenziswa zibonisa ukuthi izicubu zesilonda ngemuva kokusebenza ngaphansi kwethonya lomuthi zixazululwa ngokushesha.
Ngaphezu kwalokho, i-ophthalmic Solcoseryl ngesimo samaconsi inqunyelwe ukuvuvukala kolwelwesi lweso lwemvelo ehlukahlukene (bobabili amagciwane, ukhunta, kanye namagciwane), ngemuva kokusha, ukungenelela kokuhlinzwa kwangaphambili, kufaka phakathi ukwelashwa kwe-cataralog, glaucoma, njll.
Amaconsi eso weSolcoseryl asebenza ngokuhlangana namanye ama-ejenti ku-pathologies yeso elandelayo:
corneal dystrophy yemvelo ehlukahlukene,
Futhi, isidakamizwa sisetshenziswa lapho sigqoka amalensi okuxhumana, ahambisana nokwoma nokucasuka kwe-mucosa yeso. Ngenhloso efanayo, ukugcotshwa kwamafutha e-Solcoseryl ophthalmic kunqunyelwe.
Isidakamizwa sisetshenziswe kabanzi ku-cosmetology. Kufanele ngisebenzise kanjani i-Solcoseryl kusuka imibimbi ezungeze amehlo? Kunconywa ukuyifaka ukhilimu noma imask.
Izinzuzo eziphambili ze-solcoseryl mask:
ukusebenza kahle - umphumela uyabonakala ngokushesha ngemuva kokufaka isicelo,
amathuba aphansi wemiphumela emibi, futhi, ngakho-ke, ukuphepha.
Imaski yenza kahle ngemibimbi emihle yobuso. Ubusuku buba lula, ngakho kubukeka kuncane. Izimpawu zokukhathala ziyanyamalala. Iwoyela noma ijeli lingafakwa lodwa ngaphandle komkhiqizo ofanele wezimonyo, kepha kungabi ngaphezu kwezi-2 ezinsukwini eziyi-10.
Izinzuzo zejeli ngaphezulu kwamafutha okugcoba ukuthi zidonswa ngokushesha ngaphandle kokushiya amamaki wamafutha.
Ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo, udinga ukutadisha imiyalo yokusebenzisa ijeli leSolcoseryl, ngoba, ngaphandle kwezakhiwo ezinhle nokutholakala, umuthi unemiphumela emibi nokuphikisana.
Ama-solcoseryl Ijeli iso, kanye namanye amafomu omthamo, akuzona izithako zokudla, kodwa imishanguzo, yingakho kufanele unamathele kumthamo onconywe udokotela wakho.
Ngokukhathalela okukhulu, umuthi osendaweni yesisombululo namathebulethi kufanele usetshenziswe nge-pathologies elandelayo:
I-hyperkalemia (i-potassium ngokweqile egazini), kanye nokuthatha imithi equkethe i-potassium,
ukuphazamiseka emsebenzini womsipha wenhliziyo,
ukuphuma komchamo omncane noma akukho.
Ijeli ye-Ointment noma ye-Solcoseryl, ngokwemiyalo yokusebenzisa, kufanele isetshenziswe kanjena:
Lungiselela ukusula okuncane okucolile nejeli, ugeze izandla.
Sebenzisa indwangu eyinyumba ukusonga ijwabu leso elingaphansi ngomunwe wakho.
Cindezela ijeli elincane ku-conjunctival sac, ulihlukanise ekhoneni elingaphandle leso elingaphakathi.
Vala iso imizuzu eminingana, ulinde kuze kube yilapho umkhiqizo usatshalaliswa ngaphezulu kolwelwesi lwe-mucous.
Uma kufanele usebenzise amaconsi kaSolcoseryl wamehlo, imiyalelo yokusebenzisa kwabo izoba ngale ndlela elandelayo:
Kuyadingeka ukulungiselela amaconsi kaSolcoseryl kanye nokusula okucolile, geza izandla zakho kahle.
Tshekisa ikhanda lakho emuva kancane.
Ngemuva kokuhambisa isibaya se-conjunctival, donsela ama-1-3 amaconsi weSolcoseryl kuyo. Akunconywa ukuthi kufakwe amaconsi angaphezu kwamathathu, ngoba asasuswa okwamanje ukuvalwa kwamajwabu amehlo.
Vala amehlo akho, ngemuva kwemizuzu embalwa, umuthi uzoqala ukudonswa futhi ube nomphumela wokwelapha.
Ngosuku, kunconywa ukugcizelela ukwehla kuze kube izikhathi ezi-4 futhi uqhubeke nokwelashwa kuze kube yilapho izimpawu ze-pathology zinyamalala.
Uma amanye amathonsi wamehlo emiselwe kanye namaconsi, khona-ke uSolcoseryl kufanele afakwe imizuzu eyi-10-15 ngemuva kowokuqala.
Njengazo zonke izidakamizwa, amaconsi eso, kanye namafutha kaSolcoseryl wamehlo, ane-contraindication nemiphumela emibi. Isixazululo somuthi asinconyelwe ukusetshenziswa ezimweni ezilandelayo:
hypersensitivity noma ukungabekezeleli okuphelele okungenani kwengxenye eyodwa eyingxenye yomuthi,
isikhathi sokuzalwa kosana nobuntwana.
Kuvunyelwe ukusebenzisa ukhilimu wamehlo, ijeli namaconsi ngesikhathi sokukhulelwa endaweni yangakini, okungukuthi, ukubathinta ngokuqondile kulwelwesi lwamehlo.
Emiyalweni yokusetshenziswa kwamaconsi kaSolcoseryl, kuhlukaniswa imiphumela engemihle esigulini, lokhu kufaka: ukungezwani ngesimo kokubomvu, ukulunywa, ukuqothuka.
Ukuphendula okujwayelekile akuvamile kakhulu futhi kubonakala ngendlela yezimpawu ezijwayelekile zokwaliwa, izinguquko emizweni yokunambitha. Esizeni somjovo, ukuqubuka kungenzeka, kanye nokwanda kokushisa komzimba.
Ngaphambi kokwethulwa kwalo muthi, ngisho nangemva kokuqokwa kukadokotela, kubalulekile ukutadisha incazelo yawo. Uma omunye wemiphumela emibi ku-ejeli yeso uSolcoseryl ubonakaliswa, ngokwemiyalo yokusebenzisa, kubalulekile ukwenqaba ukusetshenziswa okwengeziwe. Uma izimpawu ziqhubeka, bonana nodokotela ozoncoma ukwelashwa.
Umuthi awunazo i-analogues. Kodwa-ke, kunemithi enesakhiwo nomphumela ofanayo. Phakathi kwazo, abadumile kakhulu yilezi: i-Actovegin, iTykveol, uwoyela we-rosehip, i-Aloe, njll.
Noma uhlela ukusebenzisa iSolcoseryl kusuka imibimbi ejikeleze amehlo ngezinjongo zokugcoba, kusadingeka isincomo sodokotela. Uchwepheshe kuphela onelungelo lokunquma ngokufakwa kwesidakamizwa esikhundleni esithile, kucatshangelwa izici ezahlukahlukene - kusuka ezimweni zomzimba ngamunye kuya kokuthandwayo ngentengo.
Umuthi utholakala ngokukhululekile ekhemisi ngaphandle kokuthola umuthi futhi unezindleko eziphansi. Ijeli noma ukhilimu kugcinwa esiqandisini isikhathi esingaphezu kwenyanga ngemuva kokuvula ithubhu.
I-solthosic ukulungiselela i-solcoseryl iyathengiswa ngohlobo lwejeli noma i-ointment futhi isetshenziswa ezimweni isidingo ukusheshisa nokukhuthaza izinqubo zokwelapha iso ngemuva ukulimala noma izifo.
Umuthi uyasebenza kunoma yimuphi umonakalo osendlaleleni we-conjunctival kanye ne-cornea.
I-Solcoseryl ijeli - isidakamizwa seqembu ama-regenerative therapeutic agentsokuyinto enqunyelwe noma iyiphi i-ophthalmic pathologies ngenxa yalokho ukulimala ungqimba lwangaphandle lweso.
Nakani! Ngokwakhiwa kwejeli noma ioyile enjalo akukho ama-antibodies namaprotheni angaba nomthelela omubi futhi onakalisayo kuma-amino acid, glycolipids nezinye izinto eziwusizo.
Ngakho-ke ukusebenza komuthi kuphakeme kakhulu kunalokho kwe-analogues, izinto zokusetshenziswa eziyinhloko zokwenziwa zazo ezingasebenzi ekuqhutshweni nasekuhlanzeni okufanayo.
Izidakamizwa eyenziwe ngesisekelo sethole lethole, okuqukethwe kwama-allergens ekwakhekeni komuthi kusondele ku-zero.
Umuthi ungoweqembu lama-biogenic stimulants futhi ikhuthaza ukusebenza kweenqubo zokuvuselela izicubu zamehlo, ngaphezu kwalokho, izakhi ze-gel zivuselela ukukhiqizwa kwe-oksijini kwezicubu, ezisheshisa ukulethwa kwezakhi zomzimba kumaseli wamehlo.
I-solcoseryl yejeli noma yokugcoba isetshenziswa ngqo ezindaweni ezonakele zeso, ngemuva kwalokho ukwakheka kumboza i-cornea ngesendlalelo esilinganayo esingavikelekile kuphela ekuvikelweni yizinto zangaphandle, kodwa futhi kungena ezicutshini, kuthuthukisa izinqubo eziseseli.
Udinga ukwazi! Umphumela wesidakamizwa uqala cishe isigamu sehora ngemuva kokuphathwa umuthi, ngemuva kwamahora amathathu alandelayo, umsebenzi wesidakamizwa uyancipha.
Umsebenzi wesidakamizwa kungenxa yesithako esisebenzayo - i-dialysate, esiza ukusebenza kwe-metabolism yeseli futhi ithuthukise izinqubo zokusetshenziswa kwe-intracellular.
Njengomphumela, izinsiza zamandla zamaseli, lapho zivezwa ngomuthi, ziyanda.
Le nto isimboza ngokushesha i-cornea ngenxa yokuba khona kwe-sodium carmellose, okunomthelela ekwakhekeni kwengqimba evikela kakhulu.
Ukusuka kule ungqimba, izakhamzimba zingena kumaseli wezicubu kuze kube yilapho lokhu kuhlanganiswa kuncibilika.
Ngezinjongo ze-ophthalmic, kusetshenziswa i-solcoseryl. ngesimo sejeli nokugcoba.
Okokubheka! Ijeli itholakala kumashubhu aluminiyamu ayisihlanu, umthamo wawo ongama-gramu ayi-5. Ukwakheka kwejeli elinjalo kufaka phakathi:
Ingxenye eyinhloko yamafutha nawo i-dialysate, izingxenye ezengeziwe yilezi:
ISolcoseryl Eye Gel enzelwe ukusetshenziswa kwangaphandle.
Ngokusho kwemiyalo yokusebenzisa ijeli wangcwatshwa amahlandla amane ngosuku ithonsi elilodwa nge-Sac conjunctival.
Uma lesi sifo siqhubeka ngesifo esibi kakhulu, kuvumelana nodokotela oholayo, ukufakwa kungenziwa ngehora ngosuku lokuqala.
Isidakamizwa sinconyelwe ukuthi sisetshenziselwe hhayi ukwelashwa kuphela, kepha futhi njengendlela yokwenza lula ukujwayeza
Kulezi zimo, ukusetshenziswa kwejeli kwenziwa ngaphambi kokugqoka ama-optics oxhumana nawo nangemva kokuyikhipha.
Amafutha abekwa amahlandla amane ngosuku ngenani lomucu owodwa 1 cm ngawo wonke iso.
Ijeli noma i-ointment isetshenziswa kuze kube yilapho izimpawu zesifo ziqediwe ngokuphelele, futhi esimweni ngasinye isikhathi sokwelashwa sinqunywa ngudokotela ohambelayo.
Ku-ophthalmology, i-solcoseryl isetshenziselwa izinkomba ezilandelayo:
noma ukulimala kwemishini kwezicubu ze-cornea,
imisebe, ukushiswa kwamakhemikhali nokushisa,
upulasitiki corneal dystrophy,
Futhi, umuthi ubekwa ngemuva kokuhlinzwa kwizitho zombono ukusheshisa inqubo yokwelapha.
Hlala ukhumbula! Contraindication ukusetshenziswa kwejeli elinjalo kubandakanya ukungabekezelelani ngakunye ezingxenyeni zomuthi, iminyaka yeziguli kuze kube unyaka owodwa, kanye nesikhathi sokukhulelwa.
Njengemiphumela emibi, ukusabela okuthe xaxa komzimba kanye nomuzwa ovuthayo ngemuva kokuphathwa kwejeli kungenzeka, kodwa esimweni sesibili asikho isizathu sokukhansela umuthi, ngoba lesi sibonakaliso siyanyamalala emizuzwini embalwa.
Umkhiqizo kumele ugcinwe emazingeni okushisa asekamelweni futhi uvikele elangeni eliqondile.
Ishubhu evaliwe ingagcinwa iminyaka emithathu kusukela ngosuku lokwenziwa kwalo, ithuluzi elivuliwe kumele lisetshenziswe ngenyanga ezayo.
I-solcoseryl eye iso inezici eziningana:
Ukuvuselela izinqubo ze-metabolic ezicutshini, umuthi othuthukisa izakhiwo zokuvuselelwa kwamangqamuzana ngesikhathi sokwelashwa.
Njenge-solcoseryl, lo mkhiqizo nawo utholakala ngokucubungula igazi lamathole.
Njengokwesisekelo se-ejenti, i-drug dexpanthenol iyasetshenziswa.
Ngaphezu kwalokho, amavithamini adingekayo ekusebenzeni okujwayelekile kwezitho zombono afakiwe ekwakhekeni komuthi.
Umuthi unomphumela omuhle kulwelwesi lwe-mucous lwamehlo, usheshisa inqubo yokuphulukisa nokuvuselelwa kwezicubu.
Ngaphezu kwalokho, i-ejenti inomphumela wokulwa nokuvuvukala.
Lapho isetshenziswa kwizitho zombono, ijeli elinjalo lenza igobolondo eliminyene le-viscous, elinikeza ukuthintana okude kakhulu kwento esebenzayo esebenzayo ne-mucosa.
Umuthi awungeni ukungena kwegazi okujwayelekile nezicubu ezithambile zamehlo.
Kumakhemisi aseRussia, intengo yesidakamizwa ingaba ngokwesilinganiso 270-300 ruble. Kwamanye amaketanga ekhemisi (ikakhulukazi enhlokodolobha), izindleko zejeli zingafinyelela kuma-ruble angama-350.
Njenganoma iyiphi enye
iqukethe isigcina se-benzalkonium chloride, leli jeli alikwazi ukusetshenziswa ngaphandle kokuqala lisuse amalensi okuxhumana, ngoba le nto ithinta kabi izinto okwenziwe ngazo amalensi.
Izidakamizwa lungasetshenziswa ngokuhlangana namanye ama-ophthalmic agents, kepha ngasikhathi sinye, ukusebenzisana kwezidakamizwa ezahlukahlukene akubandakanywa, noma bekungakaze kube nezifundo ezihlukile kule ndawo.
Ngemuva kokwethulwa kwejeli, ukwehla kokucaca kombono okwesikhashana kuyabonakala kwezinye iziguli.
Ngakho-ke, emizuzwini elandelayo engu-15 - 20 ngemuva kokusebenzisa umkhiqizo, kungcono ukwenqaba umsebenzi nezenzo ezidinga ukuqina kokubukwa nokunakwa (kufaka phakathi izimoto zokushayela nezinqubo eziyinkimbinkimbi).
“Ehlobo eledlule, isihlabathi sangishaya ngasolwandle, kwathi phakathi kwami ​​nami ngakwazi ukugaya iso ukuze evuvukele futhi evuvukala.
Ngendlela enhle, bekudingekile ukususa ngokushesha umzimba wangaphandle, kepha njengoba isikhathi esiningi sidlula phakathi kokuthola isihlabathi esweni kanye nokuvakashela udokotela wezifo zamehlo. uchwepheshe welulekwa ukufaka i-solcoseryl ijeli futhi uma ngemuva kwezinsuku ezimbalwa izimpawu zingahambi, thinta futhi.
Umuthi usizile: ukulunywa, ukusha nobuhlungu esweni lobuhlungu kunyamalala ngakusasa kakhulufuthi isihlabathi esingahlalwa ku-conjunctiva kungenzeka sivele sodwa. ”
Igor Karpov, Elista.
"Ngizwe ukuthi lena ijeli ilungele noma yikuphi ukulimala kwamehlokodwa angizange ngicabange ukuthi kimi lo muthi onjalo ungaba usizo.
Ngisebenze njengomhambisi wempahla iminyaka eminingi, futhi eminyakeni yamuva ngaqala ukukhathazeka i-conjunctivitislokho kwenzeka ngokoqobo unyaka nonyaka.
Odokotela bayakuchaza lokhu ngezindleko zomsebenzi: bathi lesi sifo singelapheki futhi sibangelwa ukwephulwa kwezinhlelo zokuvikela iso.
Ukuqeda izimpawu nokuvikela ukwanda kwezinqubo ezinjengokuvuvukala, I income ukufakwa kwe-solcoseryl ijeli kusibonakaliso sokuqala sokwephulwa.
Ngingakusho lokho umuthi uyasiza ngempela ekudambiseni ukucasuka nobuhlunguI-conjunctivitis manje idlula ngokushesha hhayi ngobuhlungu. "
UKirill Gromov, oneminyaka engama-45.
Le vidiyo inikela ngencazelo enemininingwane ye-solcoseryl yezidakamizwa:
I-Solcoseryl ayihloselwe ukuzelapha futhi iyadedelwa emakhemisi ukunikezwa kuphela kudokotela ohambelayo.
Ukusetshenziswa kwesidakamizwa esinjalo ngaphandle kokubonisana nodokotela wezifo zamehlo kungenzeka kungasilimazi isiguli, kodwa-ke, kungenzeka kungasizi ngalutho kuyadingeka ukusebenzisa izidakamizwa ezinjena ngokuya ngeshedyuli yokwelashwa eyenziwe uchwepheshe.
I-Solcoseryl isidakamizwa esiklanyelwe ukwenza izinqubo ze-metabolic ezicutshini zesitho sokubona. Lesi sidakamizwa sikuvumela ukuthi usheshise futhi uvuselele izinqubo ezihambisana nokubuyiselwa kwezicubu zamehlo ezonakele (i-conjunctiva, cornea).
I-Sorcoseryl iyisishoshovu sezinqubo ze-metabolic kwezicubu. Into yayo eyinhloko yi-dialysate ejwayelekile etholwe kumaseli wamathole ebisi. Umphumela wokwelapha walesi sidakamizwa uku:
shintsha izinqubo ze-metabolism ze-aerobic,
vuselela ukuvuselelwa kweseli,
ukusheshisa izinqubo zokutakula izicubu zamehlo ngokwenza ngcono imetabolism,
vikela i-hypoxia kumaseli,
ukusheshisa ukuphulukiswa kwezicubu ezithintekile,
ukunciphisa amathuba okuba nezibazi ze-convex ku-conjunctiva noma i-cornea.
Ngakho-ke, ingakhulisa ukumelana kwezicubu zesitho sokubona indlala yomoya-mpilo futhi ithuthukise ukusetshenziswa kwe-intracellular. Ngenxa yalokho, i-metabolism isheshiswa futhi izinsiza zamandla zamaseli ziyanda.
Ngenxa yokungaguquguquki okufana ne-gel, umkhiqizo unezindawo ezinamathela ezinhle futhi umboze kahle i-cornea isikhathi eside, unikela ekwelapheni okusheshayo kwendawo ethintekile.
Kukhiqizwa i-ejensi ngesimo sejeli wamehlo, enobulukhuni obukhulu futhi obungenamibala. Kukhona isidakamizwa kumashubhu, umthamo wawo ongama-5 g. Into esebenzayo kuyo incishisiwe dialysate yethole yamabele, kanti enye eyengeziwe yi-benzalkonium chloride, i-sodium carmellose, i-disodium edetate dihydrate, i-sorbitol, amanzi.
Umuthi ubekelwe lokhu:
ukulimala kwe-conjunctiva ne-cornea (kufaka phakathi ukuguguleka),
ukusha okuvela kwimvelaphi ehlukile (amakhemikhali, i-UV, i-thermal, njll.),
ulcer corneal kanye ne-dystrophy,
I- "Dry" keratoconjunctivitis,
I-xerosis ye-cornea ene-lagophthalmus.
Ijeli libuye lisetshenziswe ngemuva kokusebenza kwamehlo ukuze belaphe amabala ngokushesha. Kungabuye kubekelwe ukujwayela kwangaphambi kwamalensi.
Udokotela wamehlo unquma umthamo walesi sidakamizwa esigulini ngasinye. Kepha imvamisa basebenzisa ijeli ekuqaleni kwehla izikhathi ezingama-3-4 ngosuku. Inkambo yokwelashwa ihlala kuze kufike ukwelashwa okuphelele.
Uma lesi sifo siyinkimbinkimbi impela, khona-ke izicelo kufanele zenziwe njalo ngehora. Lapho uzivumelanisa nama-lenses, inqubo yenziwa ngaphambi kokufaka ama-lenses nangemva kokuwasusa.
Musa ukusebenzisa leli jeli:
abantu abane-hypersensitivity kuzakhi zomuthi,
izingane ezingaphansi kweminyaka engu-1.
Ukusetshenziswa kwaleli thuluzi kungadala imiphumela emibi. Ukuvela kwe-allergic kungavela kanye nomuzwa ovuthayo omncane wesitho sombono, nokho okungasisebenzisi njengesizathu sokuyeka ukusetshenziswa kwejeli. Umbono ungahle wehle kancane.
Awekho amacala ahambisana ne-overdose yalesi sidakamizwa. Noma kunjalo, akunconywa ukuyisebenzisa ngenhla komthamo obekwe udokotela. I-Solcoseryl kufanele futhi isetshenziswe kuphela ngemuva kokubonana nodokotela.
I-Sorcoseryl ingasetjenziswa ngokuhlangana nama-ejenti wezamehlo amaningi. Kepha kubalulekile ukugcina ikhefu phakathi kokufakwa. Ngemuva kokusebenzisa enye i-ejthalmic ejenti, leli jeli lamehlo lingasetshenziswa ngemuva kwemizuzu engu-15-20. Kepha kufanele wazi ukuthi ama-metabolites ejeli endawo anganciphisa ukusebenza kwezidakamizwa ezifana ne-Idoxuridine ne-Acyclovir.
Le ijeli akufanele isetshenziswe ngenkathi ugqoke ama-lens, ngoba iqukethe i-benzalkonium chloride, engaholela ekulimaleni kwamalensi. Njengoba kungenzeka ukunciphisa umbono lapho usebenzisa lesi sidakamizwa, kunconyelwa ukushayela imoto noma ukusebenza ngamasu adinga ukunakwa okwandayo, imizuzu eyi-15 ukuya kwe-20 ngemuva kokusebenzisa uSolcoseryl.
Awungeke usebenzise ijeli kwabesifazane abakhulelwe, ababolekayo, ngoba akukho datha ngomphumela womuthi emzimbeni walezi zigaba zabantu. Isikhathi sokusetshenziswa kweSolcoseryl akufanele sibe ngaphezu kwezinsuku eziyi-8-11.
U-Arkady, oneminyaka engama-43 ubudala
“Umsebenzi wami uhlobene nezinkuni, kwathi kanye lapho ihlazo lami lahlangana kanye. Wageza iso lakhe ngamanzi afudumele, kepha akukho okusize, kwahlala kucezwana izinkuni. Ngaya ngqo kudokotela. Uthe ukulimala kwami ​​kulimele. Udokotela wakhipha isidumbu esingaphandle wasikisela ukwelashwa. I-solcoseryl ijeli yayisohlwini lwami. Ngifunda imiyalo, isho okusetshenziselwa ukulimala kwemishini nokwamakhemikhali ku-cornea. Umuthi usizile. Emaphutheni, ngiyabona ukuthi ijeli alishibhile. ”
UVictoria, oneminyaka engama-27
“Ijeli lingisizile ukujwayela amalensi. Ngifunde ezinhlanganweni ezahlukahlukene namasayithi ukuthi akulula ukuzivumelanisa namalensi wamehlo. Kungaba mnandi futhi kubuhlungu. Kepha konke kwahamba kahle, akubanga bikho zinhlungu lapho ngifaka ama-lens, ngoba ngaphambi kwalokho ngangisebenzisa ijeli leSolcoseryl. ”
Izidakamizwa ezilandelayo zingafanelana nale ijeli:
Faka umkhiqizo endaweni efanayo ngokunconywa ngudokotela. Ukuzenza ngokwakho akunconywa.
Izindleko zalo muthi emakhemisi aseRussia ziyahlukahluka kusuka kuma-ruble angama-260 kuya kwangama-280.
Ngokwemiyalo esetshenziswayo, umuthi ubekiwe ngokuya ngenkinga ngokuya ngezinkomba ezilandelayo:
ukugcoba nejelly: amanxeba okuhlanza, ukuhlukunyezwa, ukusikeka, ukushiswa yilanga nokushisa okushisayo kwezigaba 1 no-2, i-frostbite, kanzima ukuphulukisa amanxeba, izilonda ezi-trophic, bedores,
ikhambi: ukuphazamiseka kokujikeleza kokujikeleza kwengqondo, izifo zepheripheral ye-arterial occlusion, ukugula okungapheli kwe-venous, ischemic noma i-hemorrhagic, ukulimala kwengqondo okulimazayo,
ijeli le-ophthalmic: ukulimala ngomshini nokushiswa komqubuko, i-conjunctiva, ukuphulukiswa kwezimpawu ngemuva kokuhlinzwa, izilonda, i-keratitis, i-dystrophy, i-xerosis, i-keratoconjunctivitis, yokunciphisa isikhathi sokuzivumelanisa nama-lens,
unamathisela amazinyo: I-stomatitis, i-gingivitis, i-gingivostomatitis, isifo se-periodontal, ukuphulukiswa ngemuva kokulimala komhlathi, ukwelashwa kokuhlinzwa kwe-mucosa yomlomo,
ubhontshisi jelly: ukwelashwa kwezilonda zokucindezela, ukushiswa, ukulimala ekhanda, imivimbo, ukuhlaselwa yinhliziyo.
Ngokuya ngefomu elibekiwe futhi ngokusho izinkomba zemiyalo, uSolcoseryl usetshenziswa ngokuphezulu noma ngokusetshenziswa ngaphakathi. UJelly usetshenziselwa ukwelapha amanxeba amasha ngokuphuma komswakama obuningi, ukukhala nokuxukuxa. Amafutha asetshenziswa ekwelapheni amanxeba owomile. Kuyadingeka ukufaka uSolcoseryl ngesimo sejeli yeso esikhumbeni se-conjunctival, isixazululo sithunyelwa kubazali. Ukuinameka kwamazinyo kufakwa ungqimba omncane ngaphandle kokuxikixela ezinsinini, ukugqoka okwelashwa kungasetjenziswa ngaphezulu.
Ukwelashwa kwamanxeba, kusetshenziswa i-oyile yama-Solcoseryl, esetshenziselwa ungqimba olunciphile kuze kube kabili ngosuku. Isilonda sihlanzwa kuqala ngesisombululo se magciwane. Amafutha avunyelwe ukuthi asetshenziswe ngaphansi kokugqoka, kuhlanganiswa nezindlela zokwelapha zabazali ekwelapheni ukulimala okukhulu kwesikhumba nezicubu ezithambile. Inkambo yokwelashwa, ngokuya ngemiyalo, iyaqhubeka kuze kube yilapho izilonda ziphola ngokuphelele, ukulimala kokulimala, kanye nokwakhiwa kwezicubu zomzimba ezi-cicatricial.
Abesifazane bangasebenzisa isithambiso seSolcoseryl ngezinhloso zezimonyo - basebenzise ebusweni esikhundleni sikakhilimu noma baxube ne-Dimexidum njengemaskhi. Ngokusho kokubuyekezwa, umuthi unezakhiwo ezilandelayo:
kwenza isikhumba sithuthuke, sibe muhle, sibhekwe futhi sinamathele,
kunciphisa ukubonakaliswa kokuguga, kuqeda ukukhathala.
Ngokusho kwemiyalo, umuthi uphathwa ngaphakathi, uvinjelwe ngo-250 ml kasawoti noma u-5% ushukela noma i-dextrose. Uma ukuphathwa kwe-intramuscular noma i-intravenous slowly kubonisiwe, thethelela ku-1: 1 isilinganiso. Umthamo uncike ohlotsheni lwesifo:
ngezifo ezitholakala emithanjeni yethambo - 20 ml wesisombululo nsuku zonke inyanga,
ukungaguli kahle kwe-venous insuffort nezilonda eziyinqaba - ngaphakathi 10 ml kathathu ngesonto amasonto amane,
nokulimala kobuchopho obuhlungu - ngaphakathi, izinsuku eziyi-10 ukuya kwezi-20 nsuku zonke izinsuku eziyishumi, ngemuva kwezinsuku ezi-2 ngomshini onezinsuku ezingama-30,
uma ukuphathwa kwe-intravenous kwekhambi kungeke kwenzeke, kuphathwa nge-intramuscularly ngo-2 ml / ngosuku.
Ngokusho kwemiyalo, ifomu le-ocular lejeli lifakwa ngokudonsela phansi kwi-conjunctival sac kuze kube amahlandla amane / ngosuku kuze kube yilapho izimpawu ziphela ngokuphelele. Amacala amakhulu avumela ukusetshenziswa komuthi kanye / ihora. Lapho uhlanganisa ijeli namanye amaconsi eso, kusetshenziswa okokugcina, hhayi ngaphambi kwemizuzu engu-15 ngemuva kokuba amaconsi ehle. Ukuzivumelanisa nelensi, umkhiqizo usetshenziswa ngaphambi kokufakwa nangemva kokukhipha amalensi. Lapho ufaka, ungathinti i-pipette ngezandla zakho.
Ngokusho kwemiyalo, ifomu lejeli leSolcoseryl jelly lifakwa ungqimba oluncanyana emanxebeni amasha anokukhipha umswakama, kwizilonda ngokukhala. Ukulungiswa kusetshenziselwa isilonda esihlanjululwe kuze kube kathathu / ngosuku. Uma i-epithelization isiqalile, gcoba izindawo ezomile ngamafutha. Inkambo yokusebenzisa i-jelly ihlala kuze kubonakale izicubu zomzimba endaweni ethintekile, ukomiswa kwezicubu.
Ukuqhubeka nenkambo yokuqala yokwelashwa ngesixazululo sabazali noma njengethuluzi elingelinye ekwelashweni kwezidakamizwa ezisetshenziswe kahle, sebenzisa ama-dragees. Ngokusho kwemiyalo, amaphilisi kufanele adakwe i-0,1 g kathathu ngosuku ngenkambo enqunywe udokotela. Kungcono ukubaphuza ngemuva kokudla, uphuze amanzi amaningi ahlanzekile (ngengilazi). Ukushintshwa komthamo kunqunywe udokotela.
Ingxenye eyinhloko yamalungiselelo weSolcoseryl izingxenyana zegazi lethole ngezinto zabo zemvelo ezinesisindo esiphansi semvelo, isisindo semolekyuli yaso engeqi ama-dalton ayizinkulungwane ezinhlanu.
Kuze kube manje, izakhiwo zalo zifundwa ngokwengxenye kuphela. Ukuhlolwa kwe-in vitro, kanye nezifundo zokwenziwa ngaphambi kokuhlolwa kanye nokwelashwa, kubonise ukuthi kukhishwa igazi lethole:
kuthuthukisa ukululama kanye / noma ukulungiswa i-aerobic metabolism nezinqubo ze-oxidative phosphorylation, futhi futhi kuhlinzeka ukuphinda kugcwaliswe amaseli angatholi umsoco owanele, izimboni ezinamandla amakhulu,
in vitro kuthuthukisa ukusetshenziswa kwe-oxygen futhi kusebenze ukuhanjiswa koshukela ekuhluphekeni hypoxia futhi izicubu zomzimba eziphelelwe ngumzimba namaseli,
kunomthelela ekuthuthukisweni izinqubo zokulungisa kabusha kwezicubu ezilimele ezingatholi ukondleka okwanele,
ivimbela ukukhula noma yehlisa ukuqina ukucekelwa phansi kwesibili kanye nezinguquko ze-pathologicalkumaseli alimele kabusha nezinhlelo zeseli,
kumamodeli we-vitro kusebenze i-collagen synthesis,
inomphumela ovusayo ku ukukhula kweseli (ukuzalwa kabusha) futhi zabo ukufuduka (amamodeli e-vitro).
Ngakho-ke, uSolcoseryl uvikela izicubu esimweni sokulamba kwe-oksijini kanye nokuntuleka kokudla okunempilo, kusheshisa izinqubo zokululama nokululama kwazo.
I-Solcoseryl Ophthalmic Gel yifomu lomthamo eliye lakhiwa ngokuqondile ukuphatha ukulimala. ngecornea thrombi.
Ukungaguquguquki okufana nokwenziwa komkhiqizo kuqinisekisa ukusatshalaliswa kwawo ingqwababa, nezindawo ezinhle zokunamathela ziyayivumela ukuthi ihlale phezu kwayo isikhathi eside. Ukusetshenziswa kwejazi lamehlo kusheshisa ukubuyiselwa kwezicubu ezonakele futhi kuvimbele ukuqina kwazo.
Izinga nobukhulu bokufakwa, ukusatshalaliswa, kanye nezinga nendlela yokuphuma kwento esebenzayo emzimbeni wesiguli ayikwazi ukunqunywa kusetshenziswa izindlela ezivamile ze-pharmacokinetic, kusukela ukukhishwa kwe-protein yamahhala yethole Inemiphumela ye-pharmacodynamic eyimpawu yama-molecule anezinto ezihlukile zamakhemikhali nezomzimba.
Ehlelweni lokufunda ngezimpawu ze-pharmacokinetic zesisombululo seSolcoseryl ezilwaneni, kwatholakala ukuthi ngemuva komjovo we-bolus, umphumela wezidakamizwa uthuthuka kungakapheli isigamu sehora. Umphumela uqhubeka amahora amathathu ngemuva kokuphathwa kwekhambi.
Kungani ukugcotshwa kwamafutha nejelly Solcoseryl?
Ukusetshenziswa kwamafutha okugcotshwa nejeli kuyeluleka ekwelashweni ukulimala okuncane (isb. ukuhlukunyezwa noma ukusikeka), i-frostbite, ishisa i-I ne-II degree (okushisayo noma okushisayo), amanxeba okuphulukisa kanzima (isb. ukuphazamiseka kwesikhumba se-trophic kwe-venous etiology noma imibhede).
Isixazululo somjovo: imiyalo yokusebenzisa
Ezimweni lapho isimo sesiguli sivumela, umuthi uyanconywa ukuthi usetshenziswe ngendlela yesisombululo somjovo ekuxutshweni okungenani kwe-50:50 usawoti noma isisombululo sikashukela.
I-Solcoseryl in ampoules yenzelwe ukuphatha kancane ngendlela yomjovo noma i-infusions. Uma ukuphathwa kwe-intravenous kungenzeki, kuvunyelwe ukufaka umuthi emsipha.
Njengoba umuthi osefomini lawo elihlanzekile uyikhambi le-hypertonic, kufanele uphathwe kancane.
Ngokufakwa kwe-iv, umuthi kufanele uhlanjululwe ngaphambilini nge-0,25 L 0,9% NaCl isixazululo noma 5% isisombululo sikashukela. Isixazululo seSolcoseryl senziwa ngaphakathi. Izinga lokuphatha lincike kusimo se-hemodynamic sesiguli.
Iziguli nge isifo se-peripheral arterial occlusion i-degree yesithathu noma yesine ngokwe-Fontaine ngezigaba ikhombisa ukwethulwa nsuku zonke emthanjeni we-0,85 g (noma i-20 ml yesisombululo esingafakwanga) seSolcoseryl.
Isikhathi sokusetshenziswa, njengomthetho, sifinyelela kumaviki amane futhi kuya ngesimo somtholampilo.
Iziguli nge ukugula okungapheli kwe-venous, ehambisana nokwakhiwa kokumelana nokwelashwa izilonda ezi-trophic, ukuphathwa kwe-intravenous kwe-0.425 g (noma i-10 ml yesisombululo esingafakwanga) seSolcoseryl kuboniswa kathathu ngesonto.
Isikhathi senkambo yokwelashwa akufanele singeqi amasonto amane (kunqunywa ngokuya ngohlobo lwesifundo saleso sifo).
Ukuvimbela ukwenzeka i-peripheral venous edema, ukwelashwa kufakelwa ngokusebenzisa i-bandage yokucindezela usebenzisa i-bandage elastic. Uma ikhona isikhumba trophic ukwelashwa kwenziwa ngokuhlanganisa imijovo noma ukumnika kweSolcoseryl solution nejelly, bese kuba namafutha.
Iziguli ziyaqedwa i-ischemicnomaukushaya kwe-hemorrhagic ngesimo esibi kakhulu noma esinzima kakhulu, ukuphathwa kwansuku zonke kwe-0.425 noma i-0.85 g yeSolcoseryl (10 noma 20 ml yesisombululo esingafakwanga) kunqunywe njengenkambo enkulu. Isikhathi sesifundo esikhulu yizinsuku eziyi-10.
Ukwelashwa okuqhubekayo kufaka ukuphathwa kwansuku zonke kwe-85 mg (noma 2 ml yesisombululo esingafakwanga) seSolcoseryl inyanga eyodwa.
Ngezimo ezinzima izingxabano zobuchopho ukuphathwa kwansuku zonke kwe-1000 mg yeSolcoseryl (ehambelana no-23-24 ml wesisombululo esingafakwanga) sezinsuku ezi-5 kuchaziwe.
Nge-intramuscularly, umuthi ulawulwa ngaphandle kokubhaliswa ku-2 ml / ngosuku.
I-Jelly ne-octal Solcoseryl: Imiyalo esetshenzisiwe
I-Cream ne-ointment kuhloselwe ukusetshenziswa ngqo ebusweni besilonda. Ngaphambi kokusebenzisa lezi zinhlobo zemithamo, inxeba liqala lihlanzwe kusetshenziswa isixazululo segciwane.
Iziguli nge izilonda ezi-trophickanye nasecaleni ukutheleleka okuhlanzekile kwamanxebaNgaphambi kokwelashwa, ukwelashwa kokuhlinzwa kwangaphambili kuyadingeka.
Usebenzisa i-jelly namafutha avela ku, i-frostbitekanye nokwelashwa izilonda zesikhumba nokulimala, kubalulekile ukukhumbula ukuthi kuphela ukugqoka okungenasici okufanele kusetshenziselwe ukwelapha izindawo ezonakele.
Ijeli kuhloselwe ukuthi isetshenziswe okusha (kufaka phakathi okumanzi)amanxeba nezilonda. I-ejenti isetshenziswa ungqimba omncane endaweni yokugcina isilonda ngaphambili noma kathathu ngosuku.
Ukwelashwa kwezindawo nge-epithelization eseqalile, ukusetshenziswa kwe-ointment kuyakhonjiswa. Ukusetshenziswa kwejeli kuyaluleka kuze kuthi lapho izicubu zomzimba ezibunjiwe ziqala ukwakha esikhunjeni esonakalisiwe bese isilonda siqala ukoma.
Amafutha asetshenziswa ikakhulukazi ekwelashweni oma (ngaphandle kokwenza imvula) amanxeba. Ithuluzi lisetshenziselwa ungqimba omncane endaweni yokuhlanzeka ngaphambili lapho kanye noma kabili ngosuku. Uma kunesidingo, indawo ephathisiwe imbozwe ngebhandeshi.
Inkambo yokwelashwa nomuthi okuleli fomu lomthamo iyaqhubeka kuze kube yilapho isilonda siphola futhi siphulukisa ngokuphelele ngezicubu ezixineneyo.
Iziguli nge ukulimala okukhulu kwesikhumba nezicubu ezithambile, kunconyelwa ukuhlanganisa i-jelly ne-oyili nefomu elingajoviwa leSolcoseryl.
Ukuhlangenwe nakho ngejelly namafutha ezingane kunqunyelwe.
Umuthi awunazo izinhlobo zokukhishwa njengama-suppositories. Kodwa-ke, ekwelashweni okuyinkimbinkimbi i-colitis engamahlalakhona (ukuvuvukala kwekholoni) ama-microclysters anejelly Solcoseryl ajwayelekile.
Ngaphambi kokusebenzisa, i-jelly equkethwe ku-tube (wonke ama-20 g) ifakwa ku-30 ​​ml wamanzi afudumele nangemva kwenqubo ye-enema, eyenziwa ukuhlanzaamathumbuliphathwa nsuku zonke izinsuku eziyi-10.
I-Solcoseryl eye iso: imiyalo esetshenzisiwe
Ngaphandle kokuthi kuboniswe ngenye indlela udokotela oholayo, ijeli yeso ifakiwe i-conjunctival cavity ihla elilodwa kathathu noma kane ngosuku. Kunconywa ukusebenzisa lesi sidakamizwa nsuku zonke kuze kufike ikhambi eliphelele.
Ezimweni ezinzima ikakhulukazi, ukugcotshwa kwamehlo kuvunyelwe ukufakwa okwehla ngehora. Uma isiguli sinqunyelwe ukuhla kwamehlo kanye ne-Solcoseryl i-eye iso ngasikhathi sinye, ijeli kufanele lisetshenziswe cishe isigamu sehora ngemuva kokudonsa.
Ngesikhathi sokuzivumelanisa nezindlela zokuthinta ama-lens, isidakamizwa sifakwa ngaphakathi i-conjunctival cavity ngokushesha ngaphambi kokufaka ama-lenses futhi ngokushesha ngemuva kokuwasusa.
I-Solcoseryl ku-cosmetology: yobuso, izandla, izindololane kanye nezithende, isikhumba esizungeze amehlo
Kwezokwelapha, amalungiselelo weSolcoseryl asetshenziswa ukusheshisa ukuphulukiswa kwesikhumba esonakele, kuyilapho ku-cosmetology yasekhaya asetshenziswa njengekhambi lokuqubuka kwezinduna, amamaki okweluka, kanye nemibimbi.Zisetshenziselwa ukuthambisa isikhumba, ukukhulisa i-turgor, ukuthuthukisa ukubukeka nokususa iminonjana ye induna.
Amafutha ku-cosmetology angasetshenziswa njengethuluzi elizimele (lisetshenziswa ngokuqondakalayo ezindaweni eziyinkinga, ngesimo semaskhi kanye ngesonto ngaphambi kokulala futhi amahlandla amabili kuya kathathu ngesonto esikhunjeni esiseduze kwamehlo), futhi ngokuhlanganiswa nezinye izindlela, ikakhulukazi, nomuthi I-Dimexide. Cabanga indlela yokusebenzisa lezi zidakamizwa ndawonye.
Okobuso I-Dimexide I-Solcoseryl isetshenziswa kanjena: isisombululo siyasetshenziswa kuma-ejenti ahlanzwa ngaphambili (ukukhonkotha kwe-alkaline nakho kungenziwa kusetshenziswa insipho kamoya, usawoti kanye nosawoti), kufakwa isisombululo ebusweni nasebusweni I-Dimexidum ngamanzi, elungiswe ngesilinganiso esingu-1: 10 (nje thela i-5 ml (isipuni) I-Dimexidum ngo-50 ml wamanzi), kuze kube yilapho umkhiqizo usutholile isikhathi sokugcwala, kufakwa i-Solcoseryl ointment.
Uma ijeli isetshenziswa ku-cosmetology, khona-ke imaski kufanele ifafazwe ngezikhathi ezithile ngamanzi afudumele (kungenzeka futhi ngamanzi ajwayelekile ngesifutho). Imaski ebusweni ishiywe cishe isigamu sehora noma ihora, khona-ke ukhilimu okhanyayo we-hypoallergenic uyahlanjwa bese ufakwa esikhunjeni.
Ngokusho kwabesifazane abaye bazama le ndlela yokuzifihla ngokwabo, ukugcoba kukaSolcoseryl kukhululeke kakhulu ebusweni kune-gel (ngemuva kokuyisebenzisa, awukwazi ukuyigeza, vele ususe i-napkin esele nayo). Ngaphezu kwalokho, imaski enejeli ayinconywa ukuthi isetshenziswe kaningi kunenyanga.
Kusetshenziswa njengekhambi lemibimbi ezungeze amehlo, i-Solcoseryl ointment isisizakele njengekhambi elisebenza kakhulu. Ukuyisebenzisa njengokhilimu ojwayelekile, ngemuva kweviki ungabona ukuthi inani lemibimbi nemibimbi selinciphile, isikhumba siqine futhi sibushelelezi, nombala waso usuvele waba musha futhi unempilo.
I-Dimexide ne-Solcoseryl for imibimbi ayikho ngaphansi, kepha, mhlawumbe, isebenza ngempumelelo nangaphezulu. Lokhu kungenxa yekhono I-Dimexidum ukuthuthukisa ukungena kwento esebenzayo yezidakamizwa ejulile kwezicubu. Ngemuva kokusebenzisa le mikhiqizo ngokuhlanganiswa, ukungalingani nokungapheleli kwesikhumba kuyanyamalala, futhi umphumela wemaski uqhathaniswa nomphumela I-Botox.
I-gel namafutha kungabuye kusetshenziselwe ukuthambisa isikhumba esinolaka ezinqeni nasezithendeni. Kuhle ukuzisebenzisa ezindaweni eziyinkinga ngaphambi kokulala.
Analogues of Solcoseryl
I-Analogues of Solcoseryl: I-Aekol, Acerbin, Bepanten, Isibumbu seShostakovsky, IVundehil, Depanthol, I-Contractubex, I-Pantecrem, I-Pantexol Yadran, I-Panthenol, I-Pantestin, IHepiderm Plus, I-EchinacinMadaus.
Ukubuyekezwa mayelana neSolcoseryl
Cishe konke ukubukelwa komjovo, ijeli yeso, i-jelly kanye ne-octal Solcoseryl esele izinhlaka kukhona okuhle. Ukubuyekezwa okungalungile okumbalwa kubangelwa ikakhulukazi ukuthi umuthi ucasukile ukungahambi kahle komzimbaokuhambisana nokungabekezelelani esakhiweni sayo esisebenzayo.
Ukubuyekezwa kwejeli leSolcoseryl nokulungiswa kwamafutha kusivumela ukuba siphethe ngokuthi le mishanguzo isebenza kahle hhayi kuphela ngokuqunjelwa okuncane nokushiswa okuncane, kepha futhi kusiza ukwelapha amanxeba okupholisa kanzima nezilonda.
Isilinganiso esimaphakathi somuthi kumasayithi lapho abantu babelana khona ngemizwa yabo yezidakamizwa ezithile ngu-4,8 esikalini samaphoyinti angu-5.
Ukusebenza kwamafutha okugcoba ku-cosmetology nakho kuyaziswa kakhulu. Ukubuyekezwa kwamafutha e-Solcoseryl ebusweni kukhombisa ukuthi leli yithuluzi elibaluleke kakhulu kulabo abafuna ukuqeda ngokushesha imibimbi, izinduna, futhi bamane bathuthukise umbala wesikhumba nethoni.
Ama-gel kanye nemibimbi akusebenzi kangako, kepha ama-cosmetologists akholelwa ukuthi angeke asetshenziswe kaningi kumamaski (ngokuphelele - kanye ngenyanga). Amafutha angasetshenziswa njengokhilimu ojwayelekile.
Ukusebenza kweSolcoseryl ngokumelene nemibimbi kukhuphuka lapho kuhlangene ne-Dimexide, okungenxa yekhono lokugcina lokuthuthukisa ukungena kwento esebenzayo ngokujulile esikhunjeni.
Izindleko zomuthi eRussia
Intengo yemijovo kaSolcoseryl emakhemisi aseRussia ihluka kusuka kuma-ruble angama-400 kuye kwangama-1300 (kuya ngevolumu yama-ampoules nenombolo yawo ephaketheni). Intengo ye-Solcoseryl ijeli (engasetshenziswa njengejeli lokugoqa) ngama-ruble angama-180-200. Intengo yejeli wamehlo ingama-ruble angama-290-325. Imininingwane yentengo yamakhemikhali ezibhebheni iyatholakala ngesicelo.
Isixazululo sokuphathwa kwe-intravenous (i / v) kanye ne-intramuscular (i / m): isiphuzo kusuka kokuphuzi kancane kuya kphuzi ngombala, okusobala, nephunga elithile lomhluzi wenyama (2 ml engxenyeni yengilazi emnyama, emaphaketheni amaqhuqhezu amayunithi ama-5, amaphakethe amakhadibhodi 1 noma ama-5),
ijeli yokusetshenziswa kwangaphandle: i-homogeneous, ecishe ibe ayinombala, isobala ngokungaguquki kokuqina, enephunga elibuthakathaka lomhluzi wenyama (20 g ngalinye kumashubhu we-aluminium, 1hubhu kwephakethe lekhadibhodi),
isithambiso sokusetshenziswa kwangaphandle: iyunifomu, enamafutha eningi kusuka kokumhlophe kuya kokumhlophe-ephuzi ngombala, enephunga elibuthakathaka likaphethiloli jelly kanye nomhluzi wenyama (20 g lilinye kumashubhu we-aluminium, kwiphakethe lekhadibhodi eli-1),
ijeli ye-ophthalmic: engenamibala noma iphuzi kancane, i-opalescent kancane, into engamanzi, iphunga noma inephunga elincane lesimilo (5 g ngalinye kumashubhu e-aluminium, ishubhu eli-1 kwiphakethe lamakhadibhodi).
I-1 ml yesisombululo iqukethe:
dicilela phansi dialysate egazini lamathole ebisi enempilo (ngokuya ngendaba eyomile) - 42,5 mg,
izakhi ezisizayo: amanzi wokujova.
I-1 g yejeli yokusetshenziswa kwangaphandle iqukethe:
dicilela phansi dialysate egazini lamathole ebisi enempilo (ngokuya ngendaba eyomile) - 4.15 mg,
izingxenye ezisizayo: i-propyl parahydroxybenzoate, i-methyl parahydroxybenzoate, i-sodium carmellose, i-calcium lactate pentahydrate, i-propylene glycol, amanzi wokujova.
I-1 g yamafutha okusetshenziselwa kwangaphandle iqukethe:
kunciphise ukudayela egazini lamathole ebisi aphilelekile (ngokuya ngendaba eyomile) - 2.07 mg,
izingxenye ezisizayo: i-propyl parahydroxybenzoate, i-methyl parahydroxybenzoate, uphethiloli omhlophe, i-cholesterol, i-cetyl utshwala, amanzi wokujova.
I-1 g yejeli yeso iqukethe:
dicilela phansi dialysate egazini lamathole ebisi enempilo (ngokuya ngendaba eyomile) - 8.3 mg,
izakhi ezisizayo: i-sorbitol 70% (i-crystallized), i-benzalkonium chloride, i-disodium edetate dihydrate, i-sodium carmellose, amanzi wokujova.
Isixazululo sokuphathwa kwe-intravenous and intramuscular
ukuphazamiseka kokujikeleza kwe-peripheral (i-arterial noma i-venous): Isigaba se-Fontaine III - IV esigabeni se-peripheral arterial occlusion izifo, ukugula okungahambi kahle kwe-venous ine-disc trophic,
ukuphazamiseka kokujikeleza kwe-cerebral kanye ne-metabolism: ukulimala kwe-hemorrhagic, i-ischemic stroke, ukulimala kobuchopho obuhlukumezanayo.
Gel / i-ointment yokusetshenziswa kwangaphandle
i-microtrauma ephezulu (imihuzuko, ukuhlukunyezwa, ukusikeka),
ukushiswa okungu-1, 2 degrees (elanga, elishisayo),
Kunzima ukuphulukisa amanxeba (i-bedores, izilonda ezithutha).
I-solcoseryl ijeli iyanconywa ukuthi isetshenziswe esigabeni sokuqala sokwelashwa ezindaweni ezintsha zesilonda, amanxeba ngomjuluko omanzi, izilonda ngokukhala.
Ngaphambi kokufaka lesi sidakamizwa izilonda eziyinqwaba yezicubu zemisuka ehlukahlukene, kubalulekile ukususa izicubu ze-necrotic ezinxebeni.
ukulimala ngomshini we-conjunctiva ne-cornea yeso (ukuguguleka, inhlekelele),
ukungenelela kokuhlinzwa ku-cornea kanye ne-conjunctiva (i-keratoplasty, isizinda se-cataract, imisebenzi ye-antiglaucoma) - ukusheshisa inqubo yokupholisa izibazi esikhathini se-postoperative,
i-ulcerative keratitis ye-cornea ye-viral, bacterial, etiology fungal (kufaka phakathi i-neuroparalytic), esigabeni se-epithelialization - ukusetshenziswa okuyinkimbinkimbi ngemithi yokulwa namagciwane nama-antifungal, ama-antibiotics,
ukushiswa kwe-corneal: okushisayo, amakhemikhali (ama-asidi kanye nama-alkali), imisebe (i-ultraviolet, i-x-ray neminye imisebe),
i-corneal dystrophy yemisuka ehlukahlukene, kufaka phakathi i-bully keratopathy,
I-xerophthalmia ye-cornea ngenxa ye-lagophthalmos.
Ekuqaleni kokugqoka ama-lens aqukethe kanzima futhi athambile, i-solcoseryl ejthalmic gel isetshenziselwa ukunciphisa isikhathi sokuguqulwa kanye nokwenza ngcono ukubekezelelwa kwamalensi.
Gwema kude nezingane, ubheke lezi zimo ezilandelayo:
Isixazululo: endaweni evikelwe ukukhanya, emazingeni okushisa afinyelela ku-25 ° C,
ijeli / isithambiso: emazingeni okushisa aze afike ku-30 ​​° C,
ijeli ye-ophthalmic: kumazinga okushisa ayi-15-25 ° C, kusukela lapho kuvulwa ithambo, ijeli ilungele ukusetshenziswa inyanga.
Impilo yamashalofu yiminyaka emi-5.
I-Solcoseryl: amanani entengo yemithi online
Solcoseryl ijeli ophthalmic ijeli iso le-5 g 1 pc.
I-Solcoseryl enamathisela unamathisela unamathiselwe ukuze isetshenziswe kumazinyo 5 g 1 pc.
I-Solcoseryl (ijeli) ijeli yokusetshenziswa kwangaphandle 20 g 1 pc.
I-SALCOSERIL 10% 20g ijeli
Isithambiso seSolcoseryl sokusetshenziswa kwangaphandle 20 g 1 pc.
SOLKOSERIL 5% 20g amafutha
I-Solcoseryl ijeli 20 g
I-Solcoseryl ijeli 10% 20g n1
Amafutha e-Solcoseryl 20 g
SOLKOSERIL DENTAL 5% 5g unamathisele
SOLKOSERIL 5ml 5 ama-PC. Isixazululo esiningi
Solcoseryl dent unamathisela udokotela wamazinyo. 5g
I-Solcoseryl ijeli 4.15mg / g 20g
I-Solcoseryl (yomjovo) 42,5 mg / ml isixazululo sokuphathwa kwe-intravenous kanye ne-intramuscular 5 ml 5 pcs.
I-Solcoseryl injekishini 5 ml 5 amp
Isixazululo seSolcoseryl d / inject 5ml No. 5
Isixazululo seSolcoseryl d / in. 42,5 mg / ml 5ml n5
Imininingwane mayelana nomuthi ihlanganiswa, ihlinzekelwe imininingwane yolwazi futhi ayiyithathi indawo imiyalo esemthethweni. Ukuzilapha kuyingozi empilweni!
I-Caries yisifo esithathelanayo esivame kakhulu emhlabeni wonke ngisho nomkhuhlane ongeke uncintisane naso.
Iningi labesifazane liyakwazi ukuthola injabulo ethe xaxa ngokucabanga ngemizimba yabo emihle esibukweni kunokusuka ocansini. Ngakho-ke, abesifazane, zilweleni ukuvumelana.
Izigidi zamagciwane zizalwa, ziphile futhi zife emathunjini ethu. Zingabonakala kuphela ekukhulisweni okuphezulu, kepha uma zingahlangana, zingahlangana endebe yekhofi ejwayelekile.
Emzamweni wokukhipha isiguli, odokotela bavame ukuya kude kakhulu. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, uCharles Jensen othize kusukela ngonyaka we-1954 kuya ku-1994. usinde imisebenzi engaphezu kwe-900 yokususwa kwe-neoplasm.
Izinso zethu zingahlanza amalitha amathathu egazi ngomzuzu owodwa.
Amathambo abantu anamandla amane kukakhonkolo.
Noma inhliziyo yomuntu ingashayi, angaqhubeka aphile isikhathi eside, njengoba umdobi waseNorway uJan Revsdal asikhombisa. “Imoto” yakhe yama amahora amane ngemuva kokuba umdobi elahlekile futhi alala eqhweni.
Ngokusho kocwaningo lweWHO, ingxoxo yansuku zonke yehora ngocingo ikhulisa amathuba okuthola isimila sobuchopho ngama-40%.
Lapho abathandi beqabulana, ngamunye wabo ulahlekelwa yi-6.4 kcal ngomzuzu, kepha ngasikhathi sinye baphikisana ngezinhlobo ezingama-300 zamagciwane ahlukile.
Isakhamuzi sase-Australia esineminyaka engama-74 uJames Harrison saba ngumnikeli wegazi cishe amahlandla ayinkulungwane. Unehlobo lwegazi elingajwayelekile, amasosha omzimba asiza abasanda kuzalwa abane-anemia enamandla basinde. Ngakho-ke, abase-Australia basindisa izingane ezingaba yizigidi ezimbili.
Isifo esivelakancane yisifo sikaKuru. Kuphela ngabameli besizwe sakwa-Fore eNew Guinea abagula naye. Isiguli sifa ngokuhleka. Kukholelwa ukuthi imbangela yalesi sifo udla ubuchopho bomuntu.
Igazi lomuntu "ligijimela" ngemikhumbi engaphansi kwengcindezi enkulu futhi, uma ubuqotho bayo bephulwa, lingadubula lifinyelela kumamitha ayi-10.
Isisindo sobuchopho bomuntu sicishe sibe yi-2% yesisindo somzimba esiphelele, kepha sisebenzisa cishe i-20% komoya-mpilo ongena egazini. Leli qiniso lenza ubuchopho bomuntu buthambekele kakhulu emonakalweni obangelwa ukuntuleka komoya-mpilo.
I-vibrator yokuqala yasungulwa ngekhulu le-19.Wayesebenza enjini enukayo futhi wayehloselwe ukwelapha i-hysteria yabesifazane.
Umuthi wokukhwehlela "i-Terpincode" ungomunye wabaholi ekuthengiseni, hhayi ngenxa yezimpawu zokwelapha.
Wonke umuntu angabhekana nesimo lapho elahlekelwa yizinyo. Lokhu kungaba inqubo esejwayelekile eyenziwe odokotela bamazinyo, noma umphumela wokulimala. Kuwo nalowo futhi.
Izinhlobo zokukhululwa, amagama nokwakheka kweSolcoseryl
Njengamanje, iSolcoseryl iyatholakala ngalezi zindlela ezilandelayo zomthamo:
I-Gel yokusetshenziswa kwangaphandle,
Amafutha okusetshenziswa kwangaphandle,
Namathisela ukunamathela kwamazinyo.
Ijeli ye-Ophthalmic ivame ukubizwa ngokuthi "Solcoseryl ophthalmic," isusa inkomba yefomu lomthamo. Kodwa-ke, igama linembayo impela, okwenza sikwazi ukuqonda ngqo lokho iziguli ezikhuluma ngakho, nosokhemisi, nodokotela. Isixazululo somjovo uvame ukubizwa ngokuthi imijovo noma ama-ampoules weSolcoseryl. Unamathisela wokunamathela wamazinyo ubizwa ngokuthi "Solcoseryl Dental", "Solcoseryl Paste" noma "Solcoseryl Adhesive".
Ukwakheka kwazo zonke izinhlobo zemithamo ye-Solcoseryl njengoba isithako esisebenzayo sihlanganisa dicilela phansi dialysate egazini lamathole ebisi aphilile zifane ngokwamakhemikhali nangokuphilayo. Ukuyithola ezinkomeni zobisi ezinempilo ezinikezwa ubisi kuphela, kwenziwa isampula yegazi. Ngaphezu kwalokho, kwagcwala lonke igazi, okungukuthi, wonke amangqamuzana amakhulu ahlukaniswa izingxenye ezincane. Ngemuva kwalokho, benza inqubo yokuncishiswa - ukususwa kwamangqamuzana amakhulu amaprotheni angakahlukaniswanga izingxenye ezincane ngesikhathi senqubo yokudayela. Umphumela ukwakheka okukhethekile kwezinto ezincane ezinobukhulu kanye nosayizi ezisebenzayo ezinamandla okusebenzisa i-metabolism kunoma iziphi izicubu, kepha zingaqukathi zi-allergens (amaprotheni amakhulu).
Le dialysate yethole yamabele ibekwa njengokuqukethwe kwezinhlobo ezithile zezinto, ngakho-ke, wonke, yize etholakala ezilwaneni ezahlukahlukene, aqukethe inani elifanayo lezinto ezisebenzayo futhi anomfutho ofanayo womphumela wokwelapha.
Izinhlobo ezahlukahlukene zomthamo weSolcoseryl ziqukethe inani elilandelayo lesithako esisebenzayo:
I-Gel - 10%
Amafutha - 5%,
Ijeli wamehlo - 20,
Isixazululo somjovo - 42,5 mg ku-1 ml,
Namathisela ukunamathela kwamazinyo - 5%.
Ukunameka kokunamathela kwamazinyo nakho kuqukethe i-10 mg njengesithako esisebenzayo polydocanol - izinto ezinomphumela we-analgesic (analgesic).
Amafutha e-Solcoseryl nejeli - imiyalo esetshenzisiwe
Kokubili i-oyili ye-gel ne-Solcoseryl kusetshenziselwa ukwelapha amanxeba asendaweni yesikhumba, ukusheshisa ukwelashwa kwawo. Kodwa-ke, ngenxa yemvelo yokwakheka kwayo, ijeli namafutha asetshenziswa ezigabeni ezahlukahlukene zokupholisa inxeba lelo linye noma ngesimo esihlukile sendawo yokulimala.
Ngakho-ke, ijeli leSolcoseryl alinawo amafutha, ngakho-ke lihlanzwa kalula futhi linomthelela ekwakhekeni kwama-granulations (isigaba sokuqala sokuphulukisa) ngomiswa ngasikhathi sinye kokukhipha okumanzi (exudate). Okusho ukuthi, ijeli isetshenziselwa ukwelapha amanxeba ngokuphuma kobuningi.
I-Ointment Solcoseryl iqukethe amafutha ekwakhiweni kwayo, ngenxa yokuthi yakha ifilimu evikela ebusweni besilonda. Ngakho-ke, kunconywa ukusebenzisa i-oyela ekwelapheni amanxeba owomile ngaphandle kokuchaphazeleka noma okuvele komile kwesilonda se-granerals.
Njengoba noma isiphi isilonda esisha siyoqala simanzi ngokubakhona kokukhipha, futhi kuphela uma isikhashana somile, kunconyelwa ukusebenzisa i-Solcoseryl ijeli ezigabeni zokuqala zokwelashwa, kuthi ngemuva kokumiswa nokumise ukucasulwa kokukhipha isidumbu, shintshela ekusebenziseni amafutha.
Ijeli leSolcoseryl kufanele lisetshenziswe kuphela enxebeni elihlanjululwe ngaphambilini, lapho kususwa khona zonke izicubu ezifile, ubomvu, i-exudate, njll.Awukwazi ukufaka ijeli esilondeni esingcolile, ngoba ayinazo izingxenye ze-antimicrobial futhi ngeke ikwazi ukucindezela ukuqala kwenqubo yokutheleleka. Kungakho, ngaphambi kokusebenzisa ijeli, kufanele uhlambe ulaphe inxeba ngesisombululo se-antiseptic, ngokwesibonelo, i-hydrogen peroxide, i-chlorhexidine, njll. Uma kukhona ubomvu enxebeni, khona-ke ukususwa kokuhlinzwa kwezicubu ezinegciwane kuyadingeka, futhi kuphela emva kwalokho i-Solcoseryl ijeli ingafakwa.
Ijeli isetshenziswa emanxebeni nge-liquid canachable noma ukukhala kusendlalelo esincanyana izikhathi ezi-2 kuya kwezi-3 ngosuku. Ukugqoka ngaphezulu kwejeli akusetshenziswanga, kushiya isilonda emoyeni ovulekile. Ijeli liyasetshenziswa kuze kube yilapho isilonda singasenamanzi futhi kugcwala ukoma obonakalayo esweni kubonakala kuso (indawo engalingani phansi kwesilonda, okubonisa ukuqala kwenqubo yokwelapha). Izindawo ezinamanxeba lapho inqubo yokwelapha zaqala khona kufanele ziphathwe ngamafutha. Izindawo ezisele lapho inqubo yokukhuculula ingakaqali khona kufanele zifakwe ngejeli. Ngakho-ke, womabili ijeli namafutha angafakwa ebusweni besilonda esifanayo, kodwa ezindaweni ezihlukile.
Imvamisa amanxeba amanzi aqala ukwenza ijeli ngokuphelele. Kwathi emva kwezinsuku eziyi-1 - 2, i-epithelium esanda kwenziwa emaphethelweni enxeba yagcotshwa ngamafutha, kwathi ingxenye ephakathi yesilonda iyaqhubeka nokuphathwa ngejeli. Lapho umthamo we-epithelization ukhuphuka, indawo ephathwa ngamafutha ngokufanele iba nkulu, futhi incane - ijeli. Lapho isilonda sonke sesomile, sitshelwa kuphela ngamafutha.
Isithambisi seSolcoseryl sisetshenziselwa ukomisa amanxeba ngesendlalelo esincanyana 1 - 2 ngosuku. Ngaphambi kokusebenzisa amafutha, isilonda sidinga futhi ukuhlanzwa futhi siphathwe ngesisombululo se-antiseptic, ngokwesibonelo, i-hydrogen peroxide noma i-chlorhexidine, njll. Ibhandeji elincanyana elivela bandage elingagcwele lingafakwa ngaphezulu kwamafutha. Amafutha angasetshenziswa kuze kube ukuphulukiswa ngokuphelele kwesilonda noma ekwakhekeni kwesilonda esiqinile.
Uma ukwelashwa kwezilonda ezinkulu ze-trophic esikhumbeni nezicubu ezithambile kudingekile, khona-ke kunconywa i-solcoseryl ijeli ne-ointment ekuhlanganiseni nomjovo wekhambi.
Uma, lapho kufakwa ijeli noma i-ointment, kuvela ukuthi i-Solcoseryl, ubuhlungu nokuqhamuka endaweni yesilonda, isikhumba esiseduze naso siphenduka saba bomvu futhi izinga lokushisa lomzimba lenyuka, lokhu kukhombisa ukutheleleka. Kulokhu, kufanele uyeke ukusebenzisa uSolcoseryl ngokushesha futhi uthintane nodokotela. Uma, ngokumelene nesizinda sokusetshenziswa kweSolcoseryl, isilonda asipholi phakathi kwamasonto amabili kuya kwayi-3, kuyadingeka-ke futhi ukubonana nodokotela.
Imiyalo yokusebenzisa ijeli yeso Solcoseryl
Ijeli kufanele ingeniswe kwi-conjunctival sac eyodwa yehla izikhathi ezingama-3-4 ngosuku, kuze kube yilapho izimpawu ezingathandeki zesifo zinyamalala ngokuphelele. Uma isimo sibi kakhulu futhi nezimpawu zingabekezeleleki kahle, khona-ke i-Solcoseryl ijeli ingafakwa emehlweni njalo ngehora.
Uma ngaphezu kwe-Solcoseryl eye iso, noma imaphi amaconsi asetshenziswa ngasikhathi sinye, lapho-ke kufanele afakwe ithuba elishintshashintshayo. Ngaphezu kwalokho, ijeli leSolcoseryl lihlala lisetshenziswa kokugcina emehlweni, ngemuva kwazo zonke ezinye izidakamizwa. Okusho ukuthi, okokuqala, amaconsi afakwa emehlweni, futhi okungenani imizuzu eyi-15, i-Solcoseryl ijeli. Ukuphumula kwemizuzu okungenani engu-15 phakathi kokudonsa phansi nejeli kufanele kuqapheleke nakanjani. Futhi, ungaguquki ukusetjenziswa kokusetshenziswa kwezidakamizwa esweni, okungukuthi, qala ngokulahla ijeli, bese uyawa.
Ukuze usheshise ukuzivumelanisa nezimo kuma-lens okuxhumana kanzima futhi uthuthukise ukubekezelelana kwabo, kuyadingeka ukufaka ijeli yeso ngaphambi kokufaka amadivaysi futhi ngokushesha ngemuva kokuwasusa.
Lapho ufaka ijeli, gcina ichopho le-nozzle-pipette lebhodlela ebangeni eli-1 - 2 cm ukusuka ebusweni beso, ukuze ungathinti ngengozi i-conjunctiva, amajwabu amehlo noma amashiya. Uma isipikili se-pipette sithinta ingaphezulu leso, okwembu noma okwembu, kufanele ulahle le tube ngejeli bese uvula entsha.Masinyane ngemuva kokufaka ijeli emehlweni, vala ngokucophelela ishubhu.
Ngaphambi kokufaka ijeli emehlweni, kubalulekile ukugeza izandla zakho ngensipho ukuze ungalethi ngengozi amagciwane we-pathogenic noma anesimo esithile kwi-conjunctiva engavusa ukukhula kwenqubo yokutheleleka nokuvuvukala.
Imiyalo yokusebenzisa umjovo weSolcoseryl
Isixazululo seSolcoseryl sithengiswa kuma-ampoules aboshwe aselungele ukusetshenziswa. Isixazululo singalawulwa ngokubandakanyeka noma ngemithambo yegazi.
Ukuphathwa kwe-Intravenous kungenziwa i-jet (isisombululo sifakwa kusuka ku-ampoule singene emthanjeni nge-syringe) noma nge-Drip (dropper). Kwi-drip ye-intravenous (i-dropper) yeSolcoseryl, inani elidingekayo lama-ampoules lihlanjululwe ku-250 ml we-infusion solution (isixazululo somzimba, isixazululo se-5% dextrose) futhi siphathwa ngesilinganiso samaconsi angama-20 kuye kwangama-40 ngomzuzu. Ngosuku lunye, awukwazi ukufaka ngaphezu kwe-200 - 250 ml yesixazululo se-Solcoseryl infusion.
I-solcoseryl injekishini yokujova yenziwa isirinji ejwayelekile, inalithi yayo ibekwa emthanjeni. Kwisingeniso esinjalo, inani elidingekayo lama-ampoules weSolcoseryl lithathwa, futhi isisombululo sawo sihlanganiswa ne-saline ngokwesilinganiso se-1: 1. Isisombululo esinjengalapho esihlanjululwe seSolcoseryl sikhishwa ngaphakathi, kancane imizuzu eyi-1 kuye kwayi-2.
Ngokuphathwa kwe-intramuscular of Solcoseryl, inani elidingekayo lesisombululo liqala lihlanjululwe ngosawoti ngesilinganiso esingu-1: 1. Ngemuva kwalokho isixazululo esilungiselelwe se-Solcoseryl sifakwa kancane emsipha. Ngomjovo we-intramuscular, akukho ngaphezu kwe-5 ml yesisombululo seSolcoseryl esingafakwanga ukusetshenziswa. Uma kudingekile ukwethula ngaphezu kwe-5 ml yesixazululo, khona-ke kufanele kwenziwe imijovo emibili ezingxenyeni ezihlukene zomzimba.
Umthamo we-Solcoseryl solution kanye nesikhathi sokwelashwa kunqunywa uhlobo lwesifo kanye nezinga lokuthuthuka kwezinguquko ezinhle.
Ngakho-ke, ekwelapheni izifo ezitholakala emithanjeni nasemithanjeni (ngokwesibonelo, ukuqothula i-endarteritis, njll.), USolcoseryl uphethwe ngaphakathi ngo-20 ml wesisombululo esingafakwanga nsuku zonke emavikini amabili kuya kwayi-4. Isixazululo simiswa ukuphathwa ngemuva kokuthuthuka okuqhubekayo enhlalakahleni kanye nesimo.
Ukwelashwa kokungapheleli okungapheli kwama-venous ulcers, i-Solcoseryl iphathwe ngokuxutshwa ku-10 ml wesisombululo esingahlungiwe izikhathi ezintathu ngesonto. Isikhathi sokwelashwa sinamaviki awu-1 kuye kwayi-4 futhi sinqunywa ngokulandelana esimweni ngasinye, kuye ngesilinganiso sokwenza ngcono. Ngesikhathi sokulashwa ngeSolcoseryl, ukuze wandise ukusebenza kwawo, kunconywa ukufaka ibhandeshi lokucindezela kusuka emabhandeshi wokuqina kuya emaphethelweni ukuze kuvikelwe i-edema. Kuyanconywa futhi nangaphezulu kokwethulwa kwekhambi lokugcoba izilonda ze-trophic nge-gel noma ngamafutha uSolcoseryl, okuzosheshisa ukuphulukiswa kwabo.
Imivimbo, uSolcoseryl uphathwa ngaphakathi ku-10 ml noma ku-20 ml wesisombululo esingafakwanga nsuku zonke izinsuku eziyi-10. Bese uqhubekela ekwethulweni kwe-2 ml yesisombululo esingafakwanga ngaphakathi noma nsuku zonke ngenyanga eyodwa.
Ngokulimala okukhulu kobuchopho, i-100 ml yesisombululo esingafakwanga sikhishwa nsuku zonke ngezinsuku ezi-5.
Uma kwenzeka ukulimala okulingana noma okuncane kokulimala kobuchopho, kanye nezifo zamasipha noma ze-metabolic zobuchopho, uSolcoseryl uphethwe ngaphakathi nsuku zonke 10 kuya ku-20 ml wesisombululo esingafakwanga izinsuku eziyi-10. Bese uqhubekela ekwethulweni kwe-2 ml yesisombululo esingafakwanga ngaphakathi noma nsuku zonke ngenyanga eyodwa.
Ukushiswa, isixazululo seSolcoseryl esingama-10 kuye kwangama-20 sifakwa ngaphakathi nsuku zonke. Emanxebeni asha kakhulu, ungangeza inani leSolcoseryl solution lifike ku-50 ml ngosuku. Isikhathi sokusetshenziswa sinqunywa ngokuhlukile ngokuya ngesimo selonda.
Emanxebeni okuphulukiswa isikhathi eside futhi kabi, i-6-10 ml yesisombululo esingafakwanga sikhishwa nsuku zonke emavikini ama-2-6.
Kuzo zonke izimo, ukuphathwa kwe-intravenous kweSolcoseryl kungcono ekuphathweni kwe-intramuscular. Ngakho-ke, isixazululo se-intramuscular siphiwa kuphela ezimweni lapho kungenakwenzeka khona ukujova intravenous. Lokhu kungenxa yezakhiwo eziqinile ezicasulayo zezixazululo, ezibekezelelwa kabi ukuphathwa kwe-intramuscular.
Uma, ngokumelene ingemuva kokusetshenziswa kwekhambi leSolcoseryl, umuntu eba nemiphumela engemihle, kufanele usheshe uyeke ukusebenzisa umuthi.
Imiyalo yokusebenzisa ukunamathisela izinamathela kwamazinyo Solcoseryl
Ngaphambi kokufaka i-paste, kuyadingeka ukomisa ulwelwesi lwe-mucous lwethambo lomlomo kahle nge-cotton noma i-gauze swab. Ngemuva kwalokho, cishe i-5 mm yokunamathisela ikhishwe ku-tube bese ungqimba oluncane, ngaphandle kokuthinta, lusetshenziswa endaweni ethintekile ye-mucosa yomlomo. Ngemuva kwalokho, ngomunwe noma ngotshani bekotini, khipha kancane amanzi okugcoba okusetshenzisiwe ngamanzi ahlanzekile.
Ukunameka kusetshenziselwa ulwelwesi lwama-mucous izikhathi ezingama-3-5 ngosuku ngemuva kokudla nangaphambi kokulala. Isikhathi sokwelashwa kuya ngesivinini sokululama nokwelashwa kwezifo. Kunconywa ukusebenzisa ukunamathisela kuze kube yilapho ulwelwesi lwe-mucous seluphulukile ngokuphelele.
Uma izilonda ze-decubitus zenzelwa amazinyo, khona-ke isinamathishi kufanele sisetshenziswe endaweni eyomile ye-prosthesis ebilondolozwe ngaphambili, ehlangana nolwelwesi lwe-mucous lomlomo. Ngemuva kwalokho ukunamathisela kubuye futhi kunyanyekwe kancane ngamanzi, bese i-prosthesis ifakwa ngokushesha emgodleni womlomo.
Ukunameka kokunamathela kwamazinyo akufanele kwethulwe enxebeni elenziwe ngemuva kokukhishwa kwamazinyo, kanye nokubekwa kabusha kwe-apex yezinyo (i-apicotomy) uma imiphetho yesilonda isindiswa.
I-Solcoseryl paste ayinazo izingxenye ze-antimicrobial, ngakho-ke, ngokuthuthuka kwesilonda esithambile nesokuvuvukala se-mucosa yomlomo, kubalulekile ukwelapha izindawo ezithintekile ngama-antibiotics, ama-antiseptics kanye nemithi elwa nokuvuvukala.
I-Solcoseryl paste ingasetshenziswa kubantu abadala nasezinganeni.
I-Solcoseryl ngesikhathi sokukhulelwa nokuncelisa ibele
Isixazululo, ijeli wamehlo, kanye namafutha okugcoba kanye nejeli yokusetshenziswa kwangaphandle, uSolcoseryl kufanele asetshenziswe ngesikhathi sokukhulelwa ngokuqapha, kuphela ngokuya ngezinkomba nangaphansi kokuqondisa kukadokotela. Okusemqoka, emashumini eminyaka ambalwa okusebenzisa i-Solcoseryl, akulona icala elilodwa lokungalungi kwe-fetus noma umthelela wayo ongemuhle ekukhulelweni kwabhalwa, kepha noma kunjalo, izidakamizwa azinconywa ukuba zisetshenziswe ngesikhathi sokuzala ngenxa yokuntuleka kwezifundo ezikhethekile.
Ukunamathela kokunamathisela kwamazinyo akunakunqobelana kokusebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa, kepha izifundo ezikhethekile zokuphepha kwazo nazo azenziwanga. Ngakho-ke, odokotela bamazinyo bancoma ukuthi wenqabe ukusebenzisa ukunamathisela ngesikhathi sokukhulelwa.
Ngesikhathi sokuncelisa, zonke izinhlobo zomthamo zeSolcoseryl azivunyelwe ukusetshenziswa.
Zonke izinhlobo zeSolcoseryl ngaphandle kwe-eye iso azithinti ikhono lokulawula izindlela, kubandakanya nemoto.
Ijeli ye-Ophthalmic emizuzwini yokuqala engama-20 kuye kwengama-30 ngemuva kokufaka isicelo ingavusa umbono osufiphele, ngakho-ke, ngalesi sikhathi sesikhathi, kubalulekile ukugwema imisebenzi ehlukahlukene ehlobene nokuphathwa kwezindlela. Isikhathi sonke, ijeli yezamehlo nayo ayithinti ikhono lokulawula izindlela.
I-Solcoseryl yobuso (imibimbi, ku-cosmetology)
Amafutha e-Solcoseryl okwamanje asetshenziswa kabanzi e-cosmetology nasezinhlelweni zokunakekelwa kwesikhumba ebusweni njengengxenye yomaskandi noma esikhundleni sekhilimu.Lokhu kungenxa yokuthi abakwaSolcoseryl bagcwala amaseli esikhumba nge-oksijini, kusebenze umzimba, kuqinise ulwelwesi, kwandise ukwakheka kwe-collagen, kuvumele ukuhamba kwegazi futhi kusekele ukuhlinzekwa kwezakhiwo zamaselula ngenani ledatha yamandla amancane. Ngenxa yalokhu, lo ugcobe unemiphumela eminingana emihle esikhumbeni sobuso, njengoku:
Ihexa imibimbi emihle futhi inciphise ukujula nokubonakala kokukhulu,
Khulisa isikhumba, siwenze uthambekele
Dala ukubukeka okuhle, okunempilo ngomphumela wemisebe yangaphakathi,
Inika i-velvet futhi buthuntu
Khipha izimpawu zokuguga nokukhathala kwesikhumba.
Umphumela ojwayelekile weSolcoseryl esikhunjeni sobuso ungabonakala ngegama elilodwa - anti-ukuguga. Imiphumela efakwe kuhlu itholakala cishe njalo ngemuva kokusetshenziswa okuningana kweSolcoseryl kwesikhumba, noma kunjalo, lo ugcobe ungasetshenziswa izikhathi ezi-2 kuye kwezi-3 ngesonto, uma kunesidingo.
Amafutha angasetshenziswa esikhundleni sikakhilimu, uwasebenzise ngesendlalelo esincane somzimba esikhumbeni esihlanzeziwe kusihlwa, ngaphambi kokulala futhi ungakahlambi kuze kuse. Amafutha nawo angafakwa endaweni ezungeze amehlo nomlomo. Ngamafutha okugcoba, udinga ukulala, futhi ekuseni hlamba ubuso bakho ngamanzi apholile noma afudumele kancane ngaphandle kwensipho noma ezinye izindlela zokuwasha. Amafutha akufanele asetshenziswe kaningi kathathu ngesonto.
Ngaphezu kwalokho, ungafaka uSolcoseryl kumaskhi, osusa imibimbi ngokuphelele. Ukulungiselela imaski, udinga ukuxuba isipuni esisodwa samafutha e-Solcoseryl kanye nesisombululo samafutha samavithamini A no-E. Ingxube eqediwe isetshenziselwa esikhunjeni ngesendlalelo esinyene, esishiywe imizuzu engama-30, bese isuswa ngendwangu eyomile, isifakwe emigqeni yokugcotshwa kobuso. Ukuthola umphumela omenyezelwe wokuvuselela umzimba kanye nokugcwala kwemibimbi, kunconywa ukwenza lo maski kabili ngesonto ngenyanga eyodwa. Inkambo yesibili ingenziwa ezinyangeni ezi-2.
Ukuze uthuthukise umphumela wokulwa nokuguga kweSolcoseryl, kanye nokwanda okuphawulekile kwe-turgor kanye nokuqina kwesikhumba, kufakwa isisombululo se-Dimexide emafutheni. I-Dimexide ngokwayo isebenza kahle izinqubo zokululama kabusha futhi ivuseleleke kuzo zonke izingqimba zesikhumba, ikhuthaza ukukhula kwemithambo yegazi emisha, ithuthukise ukunikezwa kwegazi kanye nokudla kwamangqamuzana.
Kodwa-ke, ukwahluka kwekhambi le-Dimexidum kulele eqinisweni lokuthi liyakwazi ukungena ngaphakathi kwezicubu futhi lingene nezinye izinto ezisebenzayo kubo. Okusho ukuthi, sibonga i-Dimexidum, ukungena kwezakhi zamafutha e-Solcoseryl ezingxenyeni ezilele kakhulu zesikhumba, kuze kufike ungqimba lwe-basal, kuyaqinisekiswa. Lokhu kukuvumela ukuthi uthathe esikhunjeni kusuka ngaphakathi, kusebenze izinqubo zokululama, ukwakheka kwe-collagen, umzimba kanye ne-oxygenation, okunikeza ukuvuselelwa kabusha, imibimbi ebushelelezi, ithoni ekhulayo nokubukeka kwemisebe yangaphakathi ne-velvety.
I-Dimexide eneSolcoseryl yokuqinisa, yokucwilisa futhi eshelelayo isikhumba sobuso asetshenziswa ngendlela yemaski esetshenziswa ebusweni isonto ngalinye noma kanye njalo emavikini amabili. Ukulungiselela imaski, hlanganisa i-Dimexide ngamanzi abilisiwe kwisilinganiso esingu-1: 10. Okusho ukuthi, izipuni eziyi-10 zamanzi zithathwa isipuni se-Dimexidum. Nge-Dimexidum ehlutshiwe, kufakwa ukotini noma i-tampon futhi ubuso buhlanjululwe kahle emigqeni yokugcoba. Ngemuva kwalokho, kuze kube yilapho isisombululo sesomile, ngqo phezu kwayo, kufakwa i-Solcoseryl ointment esikhunjeni ngensimbi eyanele ngokwanele. Imaski ishiyelwa ebusweni imizuzu engama-30 kuye kwengama-40, imanziswa ngamanzi ngezikhathi ezithile futhi ivimbele ukoma kwengqimba ephezulu yamafutha. Ngemuva kwalokho imaski isuswa ngokucophelela nge-swamp emfushane yekotini, ngemuva kwalokho ubuso bayo abuhlambi.
Uma isikhumba sibhabha, sinemibimbi eminingi, khona-ke isincoko seSolcoseryl + Dimexide sinconywa ukuthi sisetshenziswe kanye ngeviki. Uma kunemibimbi emincane esikhunjeni, khona-ke imaskhi kufanele yenziwe kanye njalo emavikini amabili.
Imininingwane eminingi mayelana nomuthi i-Dimexidum
Solcoseryl - analogues
I-Solcoseryl emakethe yezokwelapha ayinazimpawu zokuqamba eziqukethe isithako esifanayo esisebenzayo. I-Solcoseryl Injection ayinawo amalungiselelo we-analogue aqukethe enye into esebenzayo, kodwa ibe nemiphumela efanayo yokwelapha. Ngenhloso ngayinye ethile, ungakhetha i-analogue yeSolcoseryl solution, enanoma yimuphi umphumela wokwelapha odingekayo kulesi simo. Kepha izidakamizwa ezinesethi efanayo yemiphumela yokwelapha njengesixazululo seSolcoseryl azikho emakethe yezokwelapha.
Kodwa-ke, ijeli, amafutha, ijeli yeso nokunamathisela kwamazinyo kunamalungiselelo we-analog anemiphumela efanayo yokwelapha, kepha aqukethe ezinye izithako ezisebenzayo.
Izidakamizwa ezilandelayo ziyizifaniso zejeli ne-ointment yokusetshenziswa kweSolcoseryl yangaphandle:
Ijeli ye-Actovegin, uwoyela no-ayisikhilimu,
Isixazululo se-Desoxinate sokusetshenziswa kwangaphandle,
Ukukhishwa kweKamadol ukusetshenziswa kwasekhaya nangaphandle,
Ukuvuselela imifino yokusetshenziswa kwangaphandle,
Izidakamizwa ezilandelayo zi-analogues ze-Solcoseryl ophthalmic gel:
I-Taurine yehla nesisombululo,
UTaufon uyehla namafilimu,
Izidakamizwa ezilandelayo ziyizifaniso zokunameka kwamazinyo i-solcoseryl:
I-Dicloran Denta Gel,
I-Dologel ST ijeli,
Ukukhishwa kwe-Stomatophyte ketshezi,
Isixazululo seTantum Verde,